Linuxers vanogara kubva kare | Linux Vakapindwa muropa
Soy gnulinux mushandisi Makore gumi apfuura. Ndiyo OS yandinoshandisa izvozvi. Asi pane chimwe chinhu chandisati ndanzwisisa: llinuxers vanogara munguva yakapfuura. Avo vanosarudza kuita zvese yechinyakare, zvisinei Linux ndiyo OS yemazuva ano yaungabvunza. Ini handinzwisise idzi mhando dze linuxers. Ini ndinonzwisisa kuti ndizvo pedantic y kutsvinya, ndizvo zvinoitika kana usina kumbozvipfeka kana vakadzi vekupedzisira vawakarara navo vaive mazita ekupedzisira "Jpeg" uye "Avi". Asi iyo imwe nyaya. Ini ndinozvibvunza ini: Nei kubatikana nekugara munguva yakapfuura?
Kamwe kwete kare kare (2008), ndinorangarira kusaina a tsamba-runyorwa a LUG kubvunza mimwe mibvunzo nezve chimwe chinhu chausingazive. Asi zvakare kuda kugara uye kutora chikamu. Panzvimbo pemhinduro, iwo matsva ari pachirongwa akagamuchirwa kutsiura zvakashata nekutumira tsamba mukati HTML fomati. Uri wega kutsamwisa zvishoma (ndinozvibvuma) ndakavabvunza kuti vanditsanangurire chikonzero chemutemo iwoyo.
Vakandidzokorora nendangariro the netiquetta, kwete pasina kuwedzera zvakawanda zvekusanzwisisika kumhinduro dzavo. Chero mhinduro inotanga na «Zvakanaka, avo vese vanoshandisa Mutt ramba uchiisunungura nekuti wave yave html. Nekuti zvakanyanyisa kukosha kutumira zviso zvechiropa izvo zvinonyemwerera, zvichiratidza mazino avo ese uye zviri kubhodora kuburikidza nehupenyu, nekuti zvinonyanya kushanda kutumira mameseji muFrance bhuruu ruvara ... » inokodzera mhinduro mune imwecheteyo toni toni, uye saka ndakaita:
Zvirokwazvo kwete. Ngatisadaro. Zvinoita zvine musoro kubvunza munhu wese anoshandisa yako yakapfuma fomati tsamba (ese mawebhusaiti nhasi) kuti asadaro, nekuti kune vanhu vaviri pasirese vanoshandisa mutt. Uye sezvo isu tiri pano, ngatiitei maforamu mu "zvinyorwa + zvinongedzo" chete, zvevanhu vachiri kushandisa waMosesi. Ngatigadzirisei nyika yese kune eccentricities yevashoma. Nekuti zvirokwazvo zvakafanana kukumbira rampu kune vakaremara muzvivakwa sezvazviri kukumbira kuti tivhunze masitepisi ese epasi uye nekuatsiva nematombo uye kumanikidza munhu wese kuti aashandise nekuti kune geek uyo, achigona famba, haadi kuzviita, uye haafarire kune vamwe vanofamba.
Zvirokwazvo kwete. Chiropa smilies hazvidiwe. Kana ivo vakashinga kuti aite kusimbisa neshoko, kana "Italiki" kutaura chimwe chinhu. Hapana munhu anodikanwa kutara kana shoko. Nekuti izvi izwi inokwevera kutarisa pakati pechikamu senge _esta_ kana * esta *. Izvo zvinongedzo zvirinani kuzviisa pakupedzisira Hazvina kumboitika tinonyora tichishandisa mazano kana ndyaringo. Me haana, haana, haana, haana kumbobvira shamisa mukati email, inosanganisirwa tsamba iyi: P
Asi usazvidya moyo, hauzorasikirwa nechinhu kana iwe ukaverenga iyi yakajeka mameseji tsamba pane yako Mutt. Nekuti iro rakapfumiswa chinyorwa zvirokwazvo HERE zvirinani pane yakajeka mavara :)
La netiquette Yakagadzirwa muma80s ... ezana ramakore rapfuura. Uye kubvira ipapo iri kuramba ichishandiswa Pasina chero munhu anovandudza izvo! Zvinoitika kune chero munhu kuti mamiriro acho angave akachinja "zvishoma" kubva ipapo? Kuti pamwe mimwe mitemo haichashande?
Chikonzero chikuru chavakandidoma (vaigara vasina hunhu, vachizvikudza nekutsvinya) ichocho "E-mail imwe chete muHTML inorema kupfuura zvinyorwa zviri pachena". Uye ndiani ane hanya kuti iwo mavara eemail anorema zvakadii nhasi? Munguva yeYouTube mavhidhiyo, webapps uye Broadband? Izvo zvisina maturo hazvina kana kubva pamazuva e56 kbs dialup, zvinobva zvakatonyanya. Ndiani ane hanya kana email inorema makumi mashanu kb zvimwe, apo kungovhura iyo webmail waifanirwa kurodha mega dzinopfuura imwe?
Chinhu chinonakidza ndechekuti yakaiswa sei pamwechete murazvo wehondo, vashandisi vakabvunza kuti isatumirwe muHTML "Nekuti inorema zvimwe" Vakazviita nekutora nhaurirano dzese dzapfuura. Zvakadii nezve 200 mitsara ye >>>>>> zvinyorwa >> zvataurwa hapana chavanorema? Kana vakashandisa iyo pfungwa yakajairika vaizoona kusapindirana.
Mumwe munhu anofanira kugadzirisa iyo yakaipa netiquetta. Kunyange zvakadaro, shure kwezvose ... ndiani anoshandisa tsamba-zvinyorwa nhasi kunze kweLUGs?
Ikozve kune iyo linuxer iyo shandisa iyo koni kune zvese. Ehe, izvo zvinobatsira kwazvo. Kunyange inoshanda. Ichokwadi. Asi chii chaunoda kuti uzarure firefox kuburikidza neconsole? Mira kudzvanya Alt + F2 izvo zvinoita kuti ndinzwe sekunge ndiri kufamba munguva! Hatisi mukati WarGames! Hausi kuona here iyo console yandakavhura ipapo mune Nice yakajeka uye hwindo rinoyangarara? Shandisa iyoyo!
Siya koni kuti unakidze munin'ina wemusikana wako wekufungidzira, ndinoziva kushandisa linux uye ndinoziva kuti zvaive zvisina basa kuvhura kuti zviite izvozvo. Kana kumboshandisa chinhu kubva muzana rino, seGnome-DO. Kana iwe uchiri kushandisa rairo pagomo, iwe hausi wakanyanya linuxero kupfuura vamwe, zvinongoreva kuti hauna kuvandudza OS yako kubva 2003, nekuti mazuva ano chero distro sevanhu automount. Uye kana ini ndikakukumbira kuti undiratidze mamwe mafoto, nei uchitanga kupa iyo "cd bar tabo bar tsamba tabo tsamba tsamba bha tsamba tsamba tab"?
Iyo console zvakare iri maviri-anocheka mapfumo. Nei uchiteedzera mirairo kubva HOWTO's iyo iwe yawakawana paInternet, yakanangana neconsole, zvakanaka, asi chenjera kuti vamwe vanoshungurudzwa uye vanokutumira iwe kushandisa zvekare maTerminal zvirongwa zveku «20 matanho akareruka» izvo iwe zvaungadai wakaita nekaviri kudzvanya. Zano: gara uchitarisa musi wakaitwa zvakanyorwa. Kana akataura zvakawanda "floppy disk" kana kutaura nezve "nyowani" Red Hat 7, vhara zvese uye enda unoona chitsauko che Boka revanhu.
Ngatirege kukanganwa nezve linuxero «spell mucheki» izvo zvinokanganisa hurukuro yekuudza iwe "Hautauri Ubuntu, unoti 'Linux'". Kwete, shasha, warasika! Pakupedzisira zvichataurwa "Gnu linux", Iwe haufungi here?. Ndichiri kurangarira nguva apo ini ndaipikiswa nguva dzese mukosi yemaneja yekutaura Linux: "Hautaure Linux, unoti GNU / Linux" (uye vakaritaura "Gargajo-NÚ-pauseparaindicarra-linux"). Zuva richasvika pavachakuudza "usataure distro-pupular-mu-2015, zvinonzi Ubuntu » nemhepo imwechete yekufamba-famba iyo yaimboshandiswa.
Shamwari dzekupedzisira, asi zvakadaro zvisina ruzivo, ndeavo vanokuudza nhasi izvo "Haugone kuzviita mulinux" kutaura nezve izvo izvo, chaizvo, zvaisagona ... muna 2001. "Mu linux haipenye", "Mu linux haukwanise kumhanyisa windows zvirongwa", "Linux haigone kunyora kuNTFS, verenga chete". Iwe unogona kutaura kuti ivo havana kumboshandisa iyo System uye kuti ivo vanotamba nenzeve, vachidzokorora kunge maparoti zvinhu zvavakaverenga makare Vashandisi vePC. Kubva pachikoro chimwe chete kunouya iyo "Linux yakaoma", "Linux ndeye ma geeks chete" o "Linux inoratidzika kunge yakashata".
Chimwe chiratidzo chechimiro chekurarama munguva yakapfuura rarama uchinyunyuta nezvezvino. Uye iyo iripo mu linux inonzi Ubuntu. Vaya vakambonzwa kusarudzika uye kuvenga chero munhu aishandisa Windows 98; ikozvino ivo zvakare vakawedzera kune yavo inovengwa rondedzero avo vanoshandisa linux, asi shandisa distros izvo vanozviona sevasina kukodzera. Nei uchishandisa distro inoziva ese Hardware yeayo kana iwe uri akanaka uye uchigona kupedza mazuva masere uchiedza kukwidza network kana kurira? Graphics maitiro ekuisa? Izvo ndezve vashandisi.
Usandibata zvisiri izvo, vashandisi vazhinji ve gnulinux isu takanaka vibes. Uyezve, vazhinji vedu vafambi uye tinoda kuve nezvazvino zvemidziyo yazvino yakaiswa pamachini edu. Vazhinji vedu tichada kukuratidza yedu gnome-do, yedu compiz fusion. Kana iwe ukatibvunza isu maitiro ekuita chimwe chinhu, isu hatizokutume iwe ku murume uye hatisi kuzopindura zvese nekutaura "Apt-tora".
Vazhinji vedu vashandisi ve gnulinux, hatishuvire nguva apo vashoma vevabheki vanobva kune chimwe chikoro cheinjiniya ndivo vega vaikwanisa kushandisa izvi Operating system. Hatisi kupotsa grey font pane yakasviba kumashure. Tinoda iyi OS uye tinoda kuti ive mhinduro yemazuva ano kune izvo zvinodikanwa zvemumwe mushandisi, uye zvevose vashandisi.
--– Kwete, usaisa Linux pane yangu pc… .ichi chinyorwa chakanyorwa neshamwari N3RI waunogona kuverenga pane rake blog, kana kutevedzera Twitter-
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Zvimwe Linux » Linuxeros inogara munguva yakapfuura
@ christian akadaro
Yakanakisa. Kuombera maoko kuombera.
Pindura kuna @cristian
Netiquette yakagadzirwa muma80, kurudyi. Uye isu tave kutopedza makore ekutanga ezana ramakumi maviri nemasere, izvo. Asi iwewo unofanirwa kunzwisisa kuti kune vanhu vanobatana neinternet nehukama hunogona kunge huchibva kuma70s, nekuti budiriro yakakwana haina kusvika mudunhu / nyika yavo. Uye kana ukapa mhinduro yemutsetse mumwe iwe ukaisa html inotora katatu, pamwe uri kuita kuti munhu anoigamuchira abhadhare katatu kuti atore tsamba. Nehurombo, iri mamiriro mu3 / 4 yepasi. Funga nezvazvo.
Pindura kuna tsao
«Chimwe chiratidzo chechiratidzo chekugara munguva yakapfuura kurarama uchigunun'una nezve zvazvino. Uye uyo aripo mulinux anonzi Ubuntu. »
Kwete zvese zviri Ubuntu munyika yeGNU / Linux ...
Ndichiri kushandisa gomo xD uye ini handisi uya wekare: P
post yakanaka! Kunyangwe paine mashoma uye mashoma pane iwo (kana ivo vanomira akawanda akavanzwa, maLUG atove kunze kwefashoni)
Zvakareruka pamusoro pechinyorwa uye mutt, ndizvo zvatinogara tichitaura pano.
Ndatenda nekunyora N3RI, yakachena pfungwa, zvisinei, pane vanhu vanogona kugumburwa, poof.
Linuxero ini?! akadaro
@ bachi.tux Hongu, izvozvo zvakandirwadza zvakare.
Asi chandaida kutaura nezvacho yaive iyo koni. Ini ndiri mumwe wevaya vanoishandisa pazvinhu zvese, uye hazvisi zvekuti handisi kushandisa graphical interface. Ini ndinoshandisa iyo Windows imwe kwemaawa masere pazuva, Muvhuro kusvika Chishanu, kwemakore akati wandei (uye zvinosara ...).
Uye zvino ndamira kuti ndifunge: sei kana ndiri kumba ndinongoshandisa koni yacho? Ndakanga ndisati ndambofunga nezvazvo.
… (<- pano ndiri kufunga)
Ini ndinofunga imhaka yekuti ini ndinoiona ichinyatsogadzikana uye nekukurumidza. Kana kuti zvimwe zvakangojairika ... Asi kungofunga nezvekuvhura maneja wefaira kufambisa dhairekitori resaiti. kana kushandisa mbeva kuvhura application kubva kumenyu ... Ini ndoda kusarudza kusadaro. Ini ndatova nayo, ndinoshandisa iyo koni kunyara! XD
Chandaifunga nguva zhinji ndechekuti zvinosuwisa kuti Windows ine koni inosuruvarisa kuona uye inosemesa kushandisa. Ini handinzwisise kuti sei vasingavandudze. Ivo pavakadzvanya-baya mazita emafaira kuti aoneke achienda nenzira (zvinosiririsa kuenzanisa, nenzira) ndakafunga kuti pachine tariro yasara. Asi yekupedzisira windows console yandakaona ndiyo yekuona koni, uye yanga ichiri yakafanana! Pasi pemamiriro aya, hazvindishamise kuti vanhu vaishandisa windows vasati vadzidza nezve linux vane phobia yeconsole, chinofanira kunge chiri chinhu senge kushungurudzika kwehudiki.
Asi hei, ndiri kupenga. Chero ani anoda kushandisa koni kuti aishandise uye chero ani asingadi kuishandisa. Ndiani anoda kunyora nezviso :) kuzviita, uye ndiani asingadi kuzviita. Ndiani anoda kuseta runyorwa rwekutumira nerutsigiro rwe html kuzviita, uye ndiani asingade kuzviita. Uye chero munhu anoda kushandisa tsamba yekutumira isingagamuchire maemail mu html fomati anofanirwa kudaro, uye ndiani asingadaro ... zvakanaka izvo.
Huya, ini handinzwisise dambudziko.
Pindura ku Linuxero ini?!
Ini ndinogona kutaura kuti handibvumirane nezvose, kunyangwe paine zvinhu chaizvo pakati pazvo zvaunotaura.
Zvakanaka, ndakave nekurwiswa kamwechete nekuda kweirc nekuti ini ndaisakwanisa kuwana chero ftp mutengi kuti ashande uye munhu wese ainditsiura, achindiita kuti ndinzwisise kuti pakanga paine wget zvakasara zvaive zvinhu zvevakapererwa nepfungwa. Ini ndakangosiya suse ndokudzokera kubuntu.
Kutumira bullshit mune tsamba kunofanira kurambidzwa kune vanhu vasiri iwe.
Haufanire kunge uine mutt kuti ingoshandisa mavara akajeka.
Zviripachena kuti nekufamba kwenguva iwo mwero weavhareji weLinux mushandisi wadonha zvakanyanya. Kutenda kubudirira kwayo uye yakajeka shanduko.
kana iwe uchida kugadzira windows ne linux enda kumberi. ndiyo iripo.
muchina wekuwacha akadaro
Chinyorwa chakanaka haha ​​kunyangwe ndichifunga kuti maitiro awataura anotarisirwa kutarisirwa kana uchipinda runyorwa rwekutumira, nekuti mumaforamu akatsaurirwa kuLinux (uye muzviitiko zvakawanda zvakare mamwe mahebhu) zvinhu zvakadaro hazviitike, zviripo kazhinji yakanaka kwazvo kuda kubatsira (chero bedzi mibvunzo isiri pachena, uye neizvozvo ndinoreva mibvunzo inogona kuwanikwa mune isingasvike maminetsi gumi nemashanu ekufamba).
Nezve kushoropodza kwako kune vashandisi vanoratidza kuramba kweUbuntu ini ndinofunga inofanira kunge iine hwaro hwakawanda, kunyange Ubuntu uye vese @buntu vachishoropodzwa kubva kuvashandisi vekare kana kubva kune mamwe ma distros, ese aya anopokana zvakanaka uye haasaruri. Muchokwadi, ini handisati ndambonzwa chero munhu achitsoropodza @buntu nekuda kwekureruka, asi nekuda kwayo kusazivikanwa kusagadzikana, chinova chibereko chekusaremekedzwa kwevanogadzira pavanenge vachigadzika sisitimu yavo paDebian isina kugadzikana uye ichingoburitsa vhezheni se "yakatsiga" pasina izvozvo ivo zvakaedzwa zvakazara, izvo zvinowanzo guma nehutachiona hwakawanda, matambudziko pasina uye kakawanda musoro wemusoro kupfuura wiki pachayo (ndinoziva nekuti munguva pfupi yandave ndiri mu linux ini ndanga ndatoshandisa hasha shoma neUbuntu zvakananga). Kunyangwe Ubuntu iri distro iyo yakwanisa kuita kuti vashandisi vazhinji vatore iyo hombe (kwete yakakura kudaro, asi panguva iyo mumwe anoiona seiyi) nhanho kubva paNintendo kuenda kuGNU / Linux, inozvisunga nenzira kwayo pane zvimwe zvinhu zvakawanda uye pakupedzisira inotora izvo nzvimbo kure nevamwe. Zvakawanda zvirinani ma distros kungoita chokwadi chekuti cannonical ine yakawanda dineriwi. Saka ini handizive kana Ubuntu iri chaiyo iripo ye linux, zvikasadaro idzo ndistros dzakanyorwa sedzakaoma (kureva, nyaya inozivikanwa seDebian iri) yaita kuti zvinhu zvive nyore kwazvo kuvashandisi vatsva munguva dzichangopfuura.
Muzhinji uye hazvisi nechinangwa chekurwisa asi zvinoita senge kwandiri yekuchema posvo.
Ini handisi wechitendero che nettiquet, ini ndagara ndichitora mazano avo pamusoro uye handina kumbobuda kunorova mumwe munhu nekuti vakaregeredza zvinhu sekumusoro-kutumira, kunyangwe ini ndichibvuma kuti zvinoita kuti zviome kutevera tambo.
Pese pandinoitika kutora chikamu mune rondedzero, ini ndinogamuchira kuti vamwe vane mambure tag iyo yavanoda kuteedzera uye vamwe vane yakareruka vhezheni, kunyangwe vamwe vasina. Ndiyo mitemo yemutambo wenharaunda yega yega.
Kana iri html, ndinogona kukuudza kuti ini pachangu handizvifarire, maemail chete andinogamuchira (uye ini ndinogamuchira akawanda) mumhando iyi ndekukurudzira vegra uye kuwedzera pennis yako kuti pavanopinda mubhokisi rekunyora ini ndinomaka se spam . Ini ndinotofunga kuti kana vakanditumira izvo kushambadza zviri pachena zvinyorwa uye pasina mavara makuru, ini ndaizoaverenga, uye handisi kuzvitaura nekuti ini ndoda izvo zvigadzirwa:
Kana iri iyo rondedzero inoshandiswa chete nemakumbo, ndine hurombo kukupikisa. Ivo chishandiso chakakosha chekutaurirana, ndinovashandisa mazuva ese munzvimbo yebasa, ndinovashandisa pese pandinoshanda nechikwata chevanhu. Iyo inzira yakanaka yekutaurirana.
Iyo yekupedzisira (Shell) ini handinzwisise kuti nei ichikunetsa iwe kuti vanhu vanoishandisa kana kusashandisa iyo kana vachida. Ini ndinobvuma zvizere kuti inokurumidza uye inobatsira kune zvimwe zvinhu, iyo alt + f2 ipfupi inopihwa neiyo graphical interface, ini handinzwisise kuti sei iwe uchisanganisa pfungwa. Kunyanya, kana mumwe munhu achida kutaipa pabhodhi achishandisa tsoka, kana nesitiroko yemahara nenhengo yavo, tsvaga munhu iyeye, anoshandisa komputa yavo sezvavanoona zvakakodzera.
Kune zvese zvimwe zvinhu zvandinoshandisa ubuntu, ini ndaive ndisina makore makumi maviri ekuberekwa saka handisi mukuru akadaro.
Pasina koni ndinofunga ndingafe.
Kutanga firefox kana chero imwe application inoitwa kakawanda kuti zvive nyore. Nguva zhinji zvinokurumidza kunyora iyo application pane kutsvaga iyo icon mune imwe yakavanzwa menyu.
Uye zvakanyanya kukurumidza kukuratidza pikicha ine cd / tebhu / tebhu pane kuvhura chirongwa, enda kuFaira-> Vhura, tsvaga dhairekitori negonzo, mumwe neumwe tsvaga iyo faira mune irwo runyorwa wobva wadzvanya kaviri.
Nei uchiita zvese izvo kana ndichiziva ndinofanira kukuratidza mufananidzo uri mu / imba / yo / mifananidzo / foto155.jpg
Asi mumwe nemumwe anofara sezvaanoda, handingambomanikidza mumwe kushandisa koni kana zvandinoshandisa.
Pindura ku rengo.Java
Pamwe zvinotora nguva yakareba kuti zvinyorwe pane kuenda kunotsvaga, zvinoenderana nekuti ndiani akazvinyora.
kuverenga zvinyorwa ... zvinoita sekunge havazi vese vanobvumirana nepositi yako ... ini ndinoita mune zvimwe zvinhu uye kwete zvimwe ... asi izvo zvandisingabvumirane nazvo zviri muhunhu hwepositi ... »ndinofunga »Kuseka zvishoma kana chimwe chinhu chakadai: P
Izvo hazvina basa ... yega yega nenzira yavo yekuve, handiti?
Ichokwadi chaizvo izvi, zvinosuwisa kuti vashandisi ava vachiri kuwanda (mune tsamba-zvinyorwa, ini handina kuzvitenda, asi hongu) uye vane pfungwa dzakakwirana zvekuti havagare kunze kwekoni yavo, hongu ine simba, asi iyi pod ndeye rusununguko, kunyangwe kuita zvinhu nenzira yaunoda, handiti?
PS: Ivo vari kukuvadza iyo mufananidzo weLinux uye kuiisa seane udyire uye asina hunhu geek
Pindura kune Rima-mushandisi
Bvumirana nezvose zvinenge. Kungotsanangurwa. Kwaunoti Ubuntu ndinofungidzira waireva Mandriva;)
My mutt sweats it, asi kana phishing ikashanda kazhinji nekuti mushandisi ndizvo zvaari (ndinonzwisisa), uye nekuti HTML inoshandiswa mumaemail kana ichinyatso * kwete kushandiswa * (iyo email haina kumisikidzwa).
Kwete zvakaipa sekushatirwa, asi zvimwe zvinhu zvakatorwa zvishoma nezvimedu IMHO.
Buaaa wakarurama sei iwe, iyo pamusoro pehurukuro dzandakaita pamusoro pazvo, ndiri kudzidza zvemacomputer sainzi kuyunivhesiti uye hafu yevadzidzisi inovaona yakanamatira, ichikumanikidza kuita chirongwa pakoni uye kana rimwe zuva ukaenda neyako Laptop uye uvhure iwo netbeans (kupa muenzaniso) ivo vanokuudza ... ahh, ini handizive nezve izvi ... rega tione kuti gehena iwe hauzive sei!!?! KANA iri imwechete chete zvirinani uye zviri nyore!, Asi hei, paunenge uchizotanga ne laboratori uye chinhu chekutanga chaunowana mirairo yekugadzira nekuteedzera maforodha mune iyo koni iwe yaunoti…. Chii icho gehena rakagadzirwa mbeva? ...
Zvisinei, ndinokutsigira uye haisi nguva yekutanga kuti ndive neiyi «hurukuro»
Pindura kuna Angrod
Hazvina kufanana kutamba nenzeve. Kupfuura kuziva zvinhu kubva mukunzwa.
Zvimwe zvacho ndezvechokwadi.
Pindura kune safull
Ini ndinofunga zvakanaka kwazvo kuti iwe utaure zvaunofunga, asi chenjera, iwe unotaura nezve hutsinye hwemamwe mazwi evamwe vanhu uye haugone kuyera yako wega muchipositi chinorwisa vazhinji vashandisi.
Ndine ma tacos asingasviki makumi maviri, ndiri munzira yangu yekuve musayendisiti wemakomputa uye ini ndinoshandisa iyo console zvese kunze kwekudikanwa uye kunakidzwa nekuti inoshanda pahurongwa hwegumi zvakapetwa zvakanyanya kupfuura iyo graphic nharaunda mune zvakawanda zvinhu.
Izvo zvinonzi GNU / Linux kwete ye pedantic, asi yedzidzo, ivo vagadziri veiyi OS ndiyo hwaro uye mudzidzi anonzi Linus, mucherechedzo wekuremekedza iro basa rakaitwa nemapato ese, hongu, panguva zhinji zvinonzwisiswa uye kururamisa kunoratidza pedantry, asi kune vamwe inyaya yekuremekedzwa kuri nyore.
Ubuntu igadziriro yakakura nekuti inobvumira kuunzwa kuGNU / Linux nekureruka, asi zvirinani haisi yakanaka yekushandisa system, kana uchinge wamboita mune ino OS, zvakanakira kuenda kuDebian chirongwa mubereki distro.
Kana vandikumbira kuti ndivabatsire nenyaya windows, ini ndinosuwa koni yacho, kwandiri inokurumidza kushanda nayo.
Ndinoonga kuti ubuntu huripo, asi imwe yesimba re linux haisi kukumanikidza kuti uchinje makomputa makore maviri ega ega, uye izvozvi ndinogona kuisa yakareruka kugovera kana kutenga imwe komputa.
Zvinoenderana nezvezvinhu zvipi, mutt ichiri kupa yakawanda yekutamba ... :).
Pindura kuna bjone
WL n akadaro
Iwe wakarondedzera izvi zvichiganhurana nekukwana. Ndizvozvo, ndakagara uye ndikazviona. Muchokwadi, ini handichapinde mumhando ipi neipi yeforamu / chat yemhando iyi nekuda kwe "kanzuru yevakuru" inoipaza.
Ini ndagara ndichiwana miganho yekutaura, kuzvitutumadza ndiko kukurudzira kweavo "vanonzwisisa" vanokudzwa vanoda kudzidza. Ndakazviona uye ndikazvinzwa. Nekudaro, kune ese gumi ma "geeks" ane mamiriro nenzira yakasarudzika yakadaro, dzimwe nguva, ndinovimba kune mumwe ane hanya uye / kana (sekudaidza kwandinoita) "kirasi" iyo mamiriro iwe.
Zviripachena kuti hapana munhu anosungirwa mamiriro muchirevo kana foramu, asi ini handizive chavanopenda nekuti zviripo nekuda kwechinangwa icho chavari.
Wanga uchishandisa Linux kwemakore gumi uye unozvibvunza mibvunzo iyi? Iwe une chokwadi here kuti hausi wakavharwa windowszero?
Pindura kune falken
Ubuntu, iro ramangwana re linux? Kana zvirizvo, ini handidi kuona kupfuura. Iyi distro inosimudza zviyero zvangu nekuda kwayo inonakidza isina kuongororwa kuongororwa. Iwe hauna kunyatsoda rimwe fedora semuenzaniso? yum hazvisi izvo kuti zvinoshamisa, asi chokwadi ndechekuti tsvuku ngowani vanhu vanowanzo shanda zvishoma zvakaoma.
Ini ndinozvisimbisa semudziviriri mukuru weconsole, kana chero munhu akahadzika nazvo, maneja linux isina koni inobvisa yakawanda (kwete, yakawanda) yekuchinjika. Pamwe iwe unofanirwa kuwana zvishoma zvakanyoroveswa mukushandisa kwayo kuti ukwanise kuonga mabhenefiti ayo, iwe unoshaya kutorera mairi.
Man nezve tambo yekuraira ... ini ndinoshandisa rairo yekuraira zvakanyanya, kwete nekuti inotonhorera kana kuziva zvakawanda linux kupfuura vamwe, kure nazvo, imhaka yekuti inokurumidza zvakanyanya kana iwe uri kushandisa chete iyo keyboard (semuenzaniso iwe varikunyora muofficeoffice) ita alt + f2 wobva washandisa kukwira kutora mbeva uye enda kune inoenderana tebhu / bhatani / nezvimwe uye nekupa kurudyi bhatani uyezve iyo yepamusoro sarudzo. Iniwo ndinofanira kubvuma kuti kune zviitiko izvo zvinokonzerwa nekusaziva, semuenzaniso, ini handizive maitiro ekushandisa mamwe maitiro ekunyora mu k3b.
Chinhu cheUbuntu, vanochitsanangura pamusoro, kunyangwe chiri chokwadi kuti kune mwenje weruvengo kune aya asinganzwisisike distros. Chimwe chinhu senge icho chaive chakanangana nemandriva / mandrake ...
Pindura kuna jimyx17
Zviri mumagwaro akajeka!
Ndakagara ndichitaura, sekuudzwa kwandinoitwa nababa venyika, kuremekedza kodzero dzevamwe rugare, kana achifarira kushandisa koni yezvinhu zvese, zvakanyanya, kana iwe uchifunga kuti zvakaipa kugamuchira email mu html iyo yakaipa mood !!!, kana iwe uchida kushandisa chete graphic zvakanyanya kutsamwa kwako.
Q vanonyanyisa vese ... ivo vanofanirwa kudzidza nani kuremekedzana uye kurega yega yega ive yakanakira ivo.
Kwandiri, chikonzero chikuru chandinofunga nezvacho chekusatumira maemail se html inyaya yekuti magwaro ekuparadzira chinhu chinobatsira kwazvo cheruzivo, uye kune masosi anochengeta uye kunongedza iwo mameseji ezvinyorwa izvi. Kana ivo vari mu html, kazhinji iwe unopedzisira waona marara.
Handizive kana chichava chikonzero chakaringana iwe, asi ndinovimba kuti kana usina, uchazvifunga kubva zvino zvichienda mberi.
Uyezve funga nezve, semuenzaniso, vanhu vane dambudziko rekuona vanoshandisa zvinyorwa-kune-kutaura. Mutemo mukuru wechigunwe ndewekuti: mashoma mafrills, zvirinani.
Chasara chinyorwa ini handitaure, nekuti ini handina kupedza kuverenga icho: P
Iwe unosanganisa kuwanda kwezvinhu, hazvina kunaka kana iwe uchida kutora mhedziso kubva kune chimwe chinhu. Kana zvese zvaunoda kuti uve akarurama…. ipapo kana chiri chakanaka, ipapo mune chimwe chinhu chichava nacho.
Nezve iyo HTML mumameseji ... kune vatengi vemaimeri mairi anotaridzika kusanzwisisika, kana nemamwe mavara asingazivikanwe. Mavara-chete fomati ndiyo yakanyanya kukodzera, tingave tichida kana kwete. Chimwe chinhu ndechekuti zvirokwazvo zvine mutsindo kubhaiza munhu anoshandisa html.
Nezve iyo console ... ini ndinotoishandisa pamawindows. Kana ndichida kuvhura msdos hwindo ndinoenda kunotanga-mhanya uye nyora cmd. Iden ine msconfig, explorer, calc, ... Uye ini handina kukura ndichishandisa linux, saka chimwe chinhu chandaida kutaura, uye icho chinhu ndechekuti kune zvimwe zvinhu ZVINOKURA. Muzhinji, kushandiswa kwekhibhodi kunokurumidza uye kunoshanda kupfuura iko kwegonzo. Edza kudzidza mapfupi ekhibhodi muzvirongwa senge Photoshop, 3d studio max, nezvimwewo uye iwe uchaona kunyaradza kukuru kwavanofungidzira zvine chekuita negonzo. Chinhu chisina kunaka ndechekuti UNOFANIRA KUSHANDISA MUSORO.
Chaicho chinyorwa chekuti ndiani agara ari uye achange achinanzva :)
Pindura kune pimp
hahahahaha, zvinoita kunge mugore ra2009 hondo dzimwe chete dzichiri kushanda sekutanga kwema90's muFidonet. Kuti kana zvese zvakanyorwa mu7-bit ASCII, iyo ANSI yaisakwanisa kushandiswa nekuda kwezvikonzero zvakafanana zvakaratidzwa pano.
lol ndangariro dzipi, mukupedzisira iwe unoona patiri, tichifunga nezvezvinhu zvekare zvakafanana.
Pindura kuna wenlock
zvakaitika x aki akadaro
Ndanga ndiri mushandisi weLinux kwemakore uye kana ini ndaida chimwe chinhu nezveLinux ndiyo yaive koni uye ichiri senge, zvese kuchinjika uye nekumhanya kwaungaite chero basa / basa. Paunogadzirisa linux server iyo isina graphical nharaunda, iwe unonyatso kuona kuti yakawandisa sei ivo (uye kuti yakanaka sei kufamba nezvikwata)
Zvinogona kunge zvakanyanyisa asi ini ndinosarudza kugara munguva yakapfuura sezvo iwe uchizvidaidza zvisina hunyanzvi munzvimbo inoonekera pasina chinoshandiswa, pasina zvinoshuva izvo zvinongogona kupa kusaziva uye kusvika kwekugona kwemarware kune ino inoshamisa system.
PS: Kwandinoti linux, ndinoreva GNU / Linux, iyo inozonaya ichindishora
Pindura pasaba x aki
Kana iwe usiri kufarira iwo maratidziro erunyorwa, USANYORERERE MUMAIYO. Zvakareruka senge izvozvo.
Chii chisingade mavara makuru? pane chimwe chinhu pane mitemo.
Ubuntu haisi gnu / linux!
Hehe, ini handizive kushandisa zvisakafanira koni, chimwe chinhu senge kutsva kwekuita bonde ... Bashfilia? Ndiyo koni yangu uye ndinomufungira zvandinoda. Vaizoti kunze uko
iyo linuxero iyo sezviri pachena inotorwa zvinoenderana nezvakataurwa muchinyorwa, kana akazvipira kuona munhu wese seTaliban zvichienderana nekuti vanoshandisa mbeva here kana kwete, handizive kuti ndiani mumwe weTaliban.
mutt? Huya pamurume. Kwete, tarisa, zvazviri ndezvekuti munhu anyore Ubuntu (kana chero distro) kumba uye anogona kuudza musikana wake (uyo asingade kuomesa hupenyu nekomputa): izvi ndezvekubhurawuza (Firefox, hongu), izvi ndizvo senge Hofisi asi zvirinani (OpenOffice, hongu) uye nezvimwe, zvimwe kana zvishoma, unotozviwana. Iyo yekushandisa menyu ... uye haazoregi iwe kuti upedze mutongo: "Ehe, ndinoiona, izvi zvakafanana neWindows." Kwete rudo rwangu, zvirinani, zvirinani.
Kuti munhu asingade kuziva chinonzi Linux, kana nei chiri nani pane mamwe OS, kana asina kumbobata, kukwanisa kuishandisa sekunge akazviita kwese hupenyu hwake maminetsi gumi ekusvika pairi ... Ndiyo pfungwa.
Ini handinzwisise kuti zvese izvi ndezvei ... zviri pachena kuti unofarira zvinhu zvakapusa uye zvakanaka, vazhinji vedu tinofarira zvinhu zvakaitwa zvakanaka.
Ini ndanga ndisiri GNU / Linux mushandisi kwenguva refu asi ini ndaedza kudzidza izvo zvaitaridzika kwandiri uye zvinoita kunge kwandiri itsika dzakanaka, ini kazhinji ndinoedza kusapindura kumhando dzemibvunzo iyi asi ndichipa kuti inoparadzirwa zvakanyanya ini ndinofunga Icho chechiitiko chisina chokwadi uye chinoshaya nharo dzakakodzera, iwe uri munhu akareruka uye kunyangwe zvakadaro unoratidzika kunge usiri kugadzikana nazvo, uchinzwa kudiwa kwekuti isu tese tifanane newe.
Iwe uri mumwe wevaya vanotenga zvinhu nekuona uye kana isu tikayedza kuongorora kukosha kwechitsime ichocho ... hupenyu hwako hucharamba huchifinha uye uchaneta nekunyora zvinhu seizvi uye uchaenda kusuwa zvimwe zvinhu zvakawanda.
Mhoroi, ini ndanyora iwo mavara uye chokwadi ndechekuti ini ndashamisika uye handinzwisise kuti sei vachizvifananidza neTaliban linuxero uyezve vanonzwa vachirwiswa.
Ivo havafunge kuti zvinokwanisika kuti iwe uri chikamu cheanotonhora linuxers andinotaura nezvawo kumagumo, iwo akanaka vibes, anoshandisa koni zvakanyanya, asi asaishandisa zvisirizvo, avo vasingakubate iwe zvakaipa nekuda kwekuita pamusoro-kutumira , nezvimwe?
Zvinondirovesa kuti vanoziva neanonyanya kuona mushandisi weLinux uye kwete nepiola.
Carlos ruiz akadaro
Ini ndakamboona chimwe chinhu surreal ...
Pandakanga ndichitove nyowani kupfuura zvandiri kuLinux, ndakabvunza mumwe munhu maitiro ekuita chimwe chinhu muUbuntu ... zvakanaka, pakasvika nguva yekutanga zvekare, murume uya akavhura koni ndokunyora kuti:
"Sudo kudzima -h izvozvi"… Hazvifadze here, kubva pese pese pakuona, kuti uite mabhatani maviri kuti utangezve PC ... ndiani anoda kufadza neiyi «isingashandi geek» chiito?
Pindura Carlos Ruiz
Chinyorwa chakanakisa, uye chinondiyeuchidza - kuchengetedza madaro - apo Windows 3.1 yanga ichizivikanwa uye vazhinji vachidzivirira DOS vachiti maGUI aive asingabatsiri, asina ramangwana, chishongo chaicho ... Zvimwe zvese nhoroondo.
Pindura kune raregazz
Ini handidi nyaya yacho nekuti inoita senge isiri yangu, nekuti ichiri fungidziro pamberi pekushushikana kunogadzirwa nezvose izvo kusaziva kusingabvumidze kuti kuone.
Nenzira, thanks kubudirira kwakadai saJailbreak, yakagadziridzwa PSP mafemu, Wii, ... kune avo vese purist-geeks eiyo console, iyo vim uye iyo gdb.
Kuti iwe unongova mushandisi wedesktop hazvireve kuti vamwe vese vanofanirwa kuve.
Ndinoziva kuti kune vanhu vanofunga senge iwe, kunyangwe, tichifunga kuti ini ndiri mumwe weavo "linux dinosaurs", ndinofanira kutaura zvandinofunga.
Chekutanga pane zvese, wakamboedza here kubvunza chero eaya ma "dinosaurs" pane kutora yako mhedziso nezve zvavanofunga? Iwe hautaure nezvazvo mune yako posvo.
Zvandaive ndoenda. Ini ndiri wepakati Linux mushandisi, chandinonyanya kuwana kuisa kugovera, kuisa mutyairi, kukwira zvishandiso, uye zvimwe zvishoma.
Zvino, ini ndakadzidza izvi kana redhat 7 isipo, saka zvese zvaive zvinonyaradza.
Sezvaunofungidzira, zviri nyore uye zvakasununguka kwandiri kuti ndiise chimwe chinhu mumavara mamiriro pane kuzviita munzvimbo yakajeka. Zvakareruka senge izvozvo.
Zvichida iwe unonzwisisa zvirinani nemumwe muenzaniso: mushure memakore ekumhanyisa nechimedu, ini handinzwe kugadzikana kushandisa yekumhanyisa regulator mumota mangu.
Ndinovimba, ndinofunga uye ndinotarisira, kuti nekufamba kwenguva nzira yako yekugadzirisa zvinhu zvachinja.
Zvisinei, ndinokutsigira uye haisi nguva yekutanga kuti ndiite "hurukuro" iyi
Shanje dzipi. Ivo vanoda kundimanikidza kushandisa maNetbeans, uye vanondiona ndisinganzwisisike nekuti ndinotora kabhuku kangu uye ndinoshanda nevim + compiler kubva kuCLI. : '(
Wow, nhoroondo inozvidzokorora ichidzokororazve (Chaizvoizvo Izvo).
AJAJAJAJJA !!! Asi mudikani ... kana usingaifarire, usatenge.
Kana maLinuxer aigara munguva yakapfuura akaunza ruvengo rwakanyanya, iwe uri weavant-garde usatambise nguva yako navo. Regedza kutambisa nguva yako uye enderera nemashiripiti ako madhiri, nemaforamu ako azere kumeso, nemablog ako akazara uye siya avo varombo vekare ma dinosaurs kuti varambe vachinwa muto.
Endai vana vezera idzva, munhu wese anofamba akabatana kune kiosk iri pakona kunotenga zviwitsi zvine mavara.
graphical interfaces sezvakataurwa nemumwe mushambadzi kunze uko: kune newbies uye chembere madzimai, kana iwe ukashandisa chero chinwiwa che linux (sezviri Ubuntu) zvirinani kuremekedza simba uye kutonga kunogona kushandiswa "iyo koni", yakanaka kwazvo kune avo shandisa "automounting" uye iyo compiz cube, ndinozviona ndiri linux mushandisi, ndinoziva nhoroondo yayo uye zvakatora makore mapfumbamwe kushandisa akasiyana * nix flavour, mumaonero angu uri nyore newbie uyo anoshamiswa neakasiyana maficha emifananidzo asi Iwo zvinoita sekunge anonzwa kugumburwa nekuti haanzwisise, haazive kana kungo tadza nemutsetse wekuraira ... zvinokurwadza, uye zvinorwadza kuti vanhu vakaita sewe "ndeve" ve "linux" nharaunda yevashandisi ... Zvisinei, Ndakagara ndichifunga kuti iyo yakajeka mhedzisiro, iyo yekushongedza kuwandisa zvinongova izvo chirevo chekusaziva zvekuita ... Zvisinei! maonero ako anogona kunge achishanda, asi kune vatsva uye vanhu vakuru!
Chekupedzisira, nharaunda inoshandira vashandisi vekupedzisira uye zvirongwa, kugadzira, kugadzirisa hakuitwe ne "2 kudzvanya". Vashandisi chaivo kwandiri, ndeavo vatinopa! avo vatinogadzira! izvo zvatino gadzirisa, kugadzirisa uye kugovana! enda kugehena nemaoko ako maviri ekuti kana iwe uchingova wekupedzisira mushandisi, maonero ako ari kufashukira!
A GNU / * nix maneja!
PS Ini ndinotsigira chirevo che @carlitos
Pindura kuti acipe
Pasina kuisa izwi rekuti "linux" mune yakataurwa (hazvidiwe), heino maonero angu:
Izvo zvisina anogona kuita kuenda kune imwe saiti yemumwe uye kuyedza kumisikidza mitemo yayo.
Kana paine kodhi yemafambiro pane saiti yakadaro, inofanira kuremekedzwa, chimwe chinhu chinoratidzika kunge chakunetsa zvakanyanya.
Iwe unofungei kana muLXA kana mune chero webhusaiti kana sevhisi munhu wese aida kumanikidza mazano avo?
Zvakaipa pakunyora kwako. Iwe unofanirwa kuve nezvakawanda zvine chekuita nemaemail, ayo ini ndinofunga haunzwisise zvese zvakanakira.
Uye pakupedzisira, chinyorwa ichi chinowedzera kune yatove kunetsa runyorwa rwe "zvisina basa zvinyorwa" zvaunazvo muLXA. Funga zvishoma.
Skinny, iwe hauzive huwandu hwenzombe dzauri kutaura nezvadzo. Iwe hauna fungidziro yechinhu chero chipi zvacho, dzokera kuWindows. Mitemo yakaiswa munzvimbo makore mazhinji apfuura uye hausi munhu wekuvabvunza.
Vanhu vakaita sewe, havape chinzvimbo kukudziridzwa kwemaitiro, tekinoroji uye hacktivism, ndosaka iwe uchishandisa izvo zvauri kushandisa uye izvozvi hazvizonzi Ubuntu Ubuntu kugoverwa kwevanhu vasina mari vasingazive kuwedzera 2 + 2.
Iwe hauna ruzivo rwekufunga zvauri kutaura nezvazvo. Vanorwara
Pindura kuna sp0l
Mwari, ivo vakaita sevacheche kupfuura mukoma wangu ane makore gumi ekuberekwa. Ivo vanongoda kurova.
Handizive kuti sei zvinoita sezvisinganzwisisike kwauri kuti kune vanhu vanonzwira tsitsi nevaya vasingafunge senge iwe. Pane iro runyorwa ndinofunga wawana akawanda.
Mushure mekuverenga shinda (maita henyu "ini")
Ini ndinofunga pamwe munhu apindura zvisirizvo nekuti mazwi ako aive akaipa kwavari:
> Plain text? Iwe uri wekare here?
> Pane mumwe munhu anganditsanangurire kuti sei iyi tsika yechinyakare ichiri kuchengetwa?
> Pane mumwe munhu anonditsanangurira kuti nei ichichengetwa CHETE mumatsamba emazita e
gnulinux zvine hukama?
Wataura chokwadi, kana tichida "gnu / linux" kuti irambe iri mukwikwidzi akakodzera muhondo yeOS tinofanirwa kuisa yazvino uye nzira iri nani pane kubatsira mukugadzirwa kwetekinoroji nyowani tichishandisa nekuvaedza, saka imwe nguva kwete kure zvakanyanya isu ticharega kushandisa iyo koni uye tozviita zvese nemaviri mabhatani. Ubuntu inomiririra izvo uye nekuda kweizvozvo ini ndinoishandisa, ivo vanovavarira kuita kuti zvese zvive nyore uye kunze kwetaraini. Mukupedzisira izvo zvese zvinofanirwa kuitwa neOSS kuisa nekukanganwa nezvezvirongwa, ingoiswa uye ushande panguva ino, pasina magadzirirwo akaomarara semamwe ma distros ayo anenge ari kuvaka kubva pakutanga ...
Ko kana ndichiri kushandisa alt + F2 kuvhura chirongwa (kwete zvese nekuti chingave chiri kuwedzeredza haha) zvakanyanya nekuti zvinondinakira saka enda kumamenyu uzvitsvage kana ndatoziva kuraira kwayo, zvakare iyo gnome- handizvifarire here uye Awn yangu haikwane zvese zvirongwa zvandinoda… .. MACOMMENTS AKO AKURU
Zvakanaka ndinobvuma, izvo zvinoitwa neconsoon zvinoshanda zvakanyanya uye nenzvimbo inonetsa yebasa kana zvaizokwana, asi kana tichida kuunza gnu / linux kune mazhinji maPC ari munyika inofanira kunge iri nyore nzira nekuti isu gamuchira iyo curve Kudzidza kwe gnu / linux kwakakwirira kupfuura vamwe uye kupfupisa nguva inotora kune vashandisi veavice kutanga kuitisa, OS iyi inofanira kuitwa nenzira yakapusa. Ini ndinofunga kuti kuratidza kugona kwe gnu / linux kunobatsira nekuti zvakatoratidzirwa, asi ngatirege kukanganwa kuti hatisi tese nyanzvi uye izvo hazviratidze kuti hatigone kuunza gnu / linux kumushandisi mushandisi nekuti hazvisi zvese isu tiri nyanzvi. Kune avo vanongoda kufamba nenzira yakachengeteka uye kuita mabasa ari nyore asingafarire panguva ino mukugadzira kuomesa kwakaomarara neconsole. Ubuntu inobatsira kugadziridza kune gnu / linux kutanga nebasa rakazara paconsole, saka hatifanire kudzikamisa kana kurerutsa kufambira mberi kwakaitwa kurerutsa basa rekutungamira reOS kana kukwezva kwakaitwa ne gnu / linux ku Rookie maziso nekuti hazvidi kuti uve wakashata kuti uve nehungwaru (unobvuma) saka ini handinzwisise kukosha kudiki uko vamwe vanopa kune cube, kugona kugarisana murunyararo uye pasina mabugs nebasa rakaomarara iro mamwe makambani anodhinda Ku gnu / linux. ... hei, ndezve kuseka mabhajeti !!!!! uye mahwindo aro akazara nehonye kwete kutirwisa pakati peminuxers
Aya fanboys anofinha, ndinofunga kuti 70% yeavo vanoshandisa Linux vanofunga kuti iwe unokoshesa kubata nemusoro nekunyora mirairo mina pachiratidziri.
Zvizere unobvumirana nechinyorwa.
Pindura kwenguva refu
Chokwadi ndechekuti chinyorwa kana nyaya ine musoro ...
Ini ndinobvuma kuti mamwe magazini achiri kuita kunge ari kutaura nezve linux muna 2000-2002, asi inofanirwa kuve yakajairwa.
Asi zvakadaro, runako rweGNU / Linux haizi iyo iri Linux pachayo, asi kuti pane sarudzo pane zvese zvinonaka, hukuru uye mavara.
Iyi yeiyo newbie iri kutanga kumusoro (ubuntu) pamwe neanopenga linuxero-del-opus-dei uyo anofarira gentoo.
Uye kana zvakadaro hapana chinokutendisa, masosi aripo, inyaya yekugadzira yakasarudzika ...
PS: Makore gumi uchishandisa linux uye hausati wadzidza zvakawanda kupfuura kupisa netiquette? n10b!
Kazhinji, chinyorwa hachiite senge chakaipa kwandiri, asi ini ndinofunga kuti nezve kushandisa koni… zvichave ini kuti handifarire kushandisa mbeva zvakanyanya, asi ndinonyatso gadzikana pakoni. Uye ini handisi kunyange linux simba mushandisi.
Kuisa mashandisiro kubva apt-tora ndicho chinhu chakanakisa chandakawana xD
Pindura kuna r0s
Chinhu chekutanga, pachinzvimbo chekuchema zvakanyanya, enda kuMac uye saka uchave neakanaka desktop desktop uye hauzove neanyaradzo kana izvo zvisinganzwisisike zvinhu….
Pd: Ubuntu kenza, linux yakanaka pasina avhareji vashandisi, ivo vanongounza matambudziko uye havape chero chinhu kuzivo kana kusimudzira
Pindura kune imwezve
Aya ndiwo chaiwo kenza yenharaunda yeLinux. Ivo vanozivisa Rusununguko uye Ruremekedzo uye vanozvidza vashandisi pakushandisa rakasiyana system.
Marii yaunopa kune iyo ruzivo iwe yaunofunga kuti inokupa iwe kodzero yekuzvidza vamwe vashandisi ... sezvandataura, iwe uri gomarara chairo.
Pindura kuna Reob
Flash haisi chiyero? .. ..Asi ... zviri zvese pa internet !!!!
Ini ndinofunga chakanyanya kukodzera chinhu chingave chekubvisa ichi chinyorwa.
jojojojoj… .why ?????… usave fan !!
Ndiregerere, ini handisi penguin .. yangu iri bsd .. uye chokwadi ndechekuti, kunyangwe mu winchot, ini handizive kuti ping kana traceroute kubva kune graphic nharaunda ... ini ndichiri kuda iyo koni. Ini handisi masochist kuona avi ini ndinotasva graphic nharaunda .. asi ini ndinoda iyo yekunyaradza zvirinani uye iyo mount uye umount zvinondipa yakawanda rugare rwepfungwa kuti zvese zviri munzvimbo yayo.
Zvakare parizvino dbus uye hald hazvisi pane zvandinofarira nekutadza kwavo kudiki
Ini ndaida iyo posvo, ndinokukorokotedza iwe nekuda kwekukosha kwako kwekuseka uye chiitiko chemhinduro yakakodzera.
Ndiratidze iyo RFC, ECMA kana ISO ...
Chero bedzi iwe usingawani imwe, ichiri chigadzirwa chebhizimusi chekambani x, iwe unoda muenzaniso wehukama? A: Sirivhenekeri.
PS: Dai Flash yaive yakajairwa (Flash isiri ActionScript), nei zvingave zvakakosha kuisa zvakadzamidzirwa maficha maficha mu html5?
Chokwadi, nekuti pandinotarisa vhidhiyo mune flash ndinogara ndichifarira kuona iyo RFC, ECMA kana ISO. Kana uine hanya, imhaka yekuti uri kurwara zvachose
Iwe unoda kururamisa mapenzi ayo asingatomboyeuke yavo chaiyo password? ... zvinoita sekunge zvakaitika kwauri
Ndinoziva kuti pamberi pekusvika kweUbuntu uye vese vayo vashandisi vashandisi Linux ine yakawanda shit, ivo vanotenda kuti ndiyo panacea yekombuta sainzi uye zvimwe zvisina maturo. Muchokwadi, ndichishanyira maforamu eubuntu ini ndawana posvo inotaura kuti Ubuntu ndiyo yakanyanya kunaka distro (inopfuura kupokana) nezviitiko umo ivo vaisatomboziva kuti zvakange zvamuka kubva mukusagadzikana vhezheni yedebian ichiisa ichi kuberekwa. .. Ini ndinofunga inotaura saka zvese (uye kana ukasvetuka neizvozvo, ini handishandisi debian uye handina kutsamwa nezvazvo)
Ini ndinofunga kuti rudzi urwu rwemushandisi rwunoshoresa zvakanyanya kupfuura zvandakaita, uye munhu ari pamusoro peiyi hurukuro akazviita nekusanganisa churras ne merino, zvakakonzerwa neshungu nekuti havana kumuudza kuti kwakanaka pa tsamba runyorwa ...
Kutumira maemail eHTML kune rondedzero kunobva kune jongwe uye SPAMers. Iwe unoona, kana iwe ukatumira email kune rondedzero uye nezvimwe saka kana _you_ uchida kubvunza chimwe chinhu, iyo email inogona kushanduka kuva zviuru zvemhinduro, imwe mushure meimwe. Iwe uchaona kuti yakanaka sei yako HTML specimen inopera kana mhinduro yekutanga ikasashandisa. Wanzwisisa here kana iwe unoda girafu?
Nekusarudzika kunoremekedzwa (senge fer), zvirevo zvinopesana hazvingoiti chinhu kunze kwekusimbisa zvinotaurwa nerugwaro. Kutenda iwe pachako kukunda vamwe (semuenzaniso, uchifunga kuti ini hapana chandinoziva nezve gnulinux kana kuti avo vasingafunge senge "nekuti ivo havazive kana kusanzwisisa") ese achiperekedzwa neakawanda Kutuka kusingataure chinhu ... yakapusa bakoman kugunun'una.
Zvinosuruvarisa kwazvo kuti isu tine hunhu hwakadai munharaunda Yemahara Software.
Ndosaka ndichinyanya kutenda Fer, uye avo, saiye, vakakwanisa kuratidza kusawirirana kwavo nerugwaro, asi nenzira yekuremekedza. Kunyangwe hazvo zvinyorwa zviri parody. Kunyangwe isu tichifunga zvakasiyana, zvirevo zvinoongwa.
Dai munhu wese asingabvumirane nechinyorwa changu anga akaita saiye ... ini ndaizofanira kudzosa zvinopfuura chimwe chezvirevo zvangu ... asi kwete, vakangogunun'una, senguva dzose.
Uye zvakawandisa, avo vanofunga zvakafanana neni, avo vanoona izvo zvakafanana zviratidzo izvo vazhinji vedu vanoona, vasiya zvavakataura zvine ruremekedzo rukuru uye zvakanaka vibes.
Izvo zvinotaura zvakawanda zvakawanda nezve yemahara software nharaunda uye nenhengo dzayo kupfuura ino zvinyorwa kana chero imwe.
Mmmm ... izvi zvaifanira kutarisirwa, chinyorwa chakanhuwa semurazvo uye chokwadi vanhu vanoramba vachichivhiringidza, ini ndaizoda kuti vanhu panzvimbo pekurwa nekutsamwa vazvikwanise kupindura pazvinhu zvinoverengwa muchinyorwa, asi sei hazvisi kuzoitika ndinoshamisika kana iwe uchigona kurega kugamuchira makomendi nepositi, ini handidi spam mune yangu XD
Ndakagara ndichizvitaura, ndichipindura mubvunzo mushandisi wevano gamuchira rairo yekupindura, Linux haizove inozivikanwa OS.
Kana kushandisa nharaunda kwakanyanya uye kushandisa bash kwakashata, wadii kucheka 1000 mifananidzo kubva 640 × 480 kusvika 320 × 200 saizi, kutanga kubvarura ku100, 100 kurongedza? Ale! Zviite nemuchina wePhotohop!
Ravenman …… wakanyora makomenti mashanu akateedzana? troll yakadii nekuda kwaMwari!
Pindura kune orc
Raul hongu, ini ndoda kuti vafunge seni ... kunyora kamwe chete kupindura kupindura kune vese, uye kwete kunyora mashanu makomendi. Ndiri chikara. Unogona here kunyora mitsara mamirioni maviri muoni kuti uone flv uye haugone kugadzirisa imwe komendi nekutora mazwi mazhinji, nekuda kwaMwari. Kunze kwezvo, hapana kana imwe chete yemaonero inobviswa, uye hapana chinoongororwa, uye munhu wese akasununguka kutaura zvavanofunga. Haisi iyo chinangwa chedu kupa zvachose chero chinhu kunharaunda. Ndiyo here zvinoreva blog? Zvirinani kwete iyi. Ini ndinokukoka iwe kuti ushanyire mamwe mabloggi ayo iwe aunowana zvirokwazvo zvisingaverengeke mipiro, iwe haungaiwana pano. Hezvino izvo zvauchazowana, yakawanda yekuzvitsoropodza, uye yemahara kutaura kwemaonero. Kunze kwezvo, hapana munhu anoongororwa pano, zvakanyanya sevabati vemahara software yekuda kuongorora avo vasingafunge sevanorova. Chii ichi "bvisa iyi posvo? Fara."
hapana munhu anotaura nezve kusamboshandisa iyo koni. Chinyorwa chinotaura nezvevaya vanoita obsess uye nekuishandisa pazvinhu zvese, kunyangwe kana zvichivarwadza kana zvakanyanya kuomarara (sekuremadza iyo automount uye kuda kukwira zvese neruoko)
nenzira, ini handisati ndawana maitiro ekuona vhidhiyo inosetsa kwazvo iyo yakatumirwa kwandiri kubva kuYouTube pane lynx ... pamwe uchandiudza kuti ndozviita sei ... «muchina»
(kwete kuti ndiri kunyatsofarira, unongova muenzaniso wejee)
Nyatso taura kuti hautorere, nekuti ndine chokwadi kuti pane imwe nzira yekuibata uye kuiona kuburikidza ne xDDD koni
Ini ndinopesana zvachose nezvamunotaura nezve ubuntu, kana kuti ndezvekuti iwe hausati waona izvo zvinounzwa neGNOME nekusarudzika !! Uye izvo zvinofanirwa kuve zvikonzero zvejeri! KDE inotonga !!
Pindura kuna mmmmmmm
Anonakidza YouTube vhidhiyo? kwete kuburikidza nehukama, sezvo iri bhurawuza inoremekedza zviyero uye kupenya haisi chiyero.
Asi kana iwe uchigona kurodha pasi iyo faira (flv) uye wotarisa vhidhiyo yako kubva kunyowani usina kana kushandisa X, nekuda kwechinhu chinonzi framebuffer.
Kunyangwe iwe uine tuner iwe waigona kuona TV kubva kune tty usina kana kuva neX (ndinodzokorora).
Iwe unotaura nezve kusashandisa iyo koni uye wozoenda kunotaura kuti unoshandisa, une yakakosha bipolar shamwari.
Chimwe chinhu, iwe wakambofunga here kuti iwe unoshandisa izvo zvaunoshandisa nekutenda kune mupiro wakaitwa nemazhinji dinosaurs? Iwe unofunga kuti dai aive ese ma n00bs, ino sisitimu yaizove neramangwana? NezveUbuntu, ndiko kumwe kugovera (ini handizvifarire, semuenzaniso), asi handifunge kuti chinhu kubva kune imwe nyika, nekuti izvo Mandriva naFedora vanga vachiita kare kare, vanongopindirana vasina kugadzikana eDebian repositori. neyako mwedzi mitanhatu uye vhezheni nyowani inobuda nemabhugi mazhinji.
Iwe unotaura kubva mukusaziva kwakadzika (ini handikuzive iwe, asi zvaunotaura uye chinyorwa zvinoratidza izvozvo), umo iwe unogumbura vanhu vazhinji, hukuru hwekuzvikudza uye hukuru hwekuzvikudza. Ini ndinofunga chakanyanya kukodzera chinhu chingave kutora chino chinyorwa
Zvirokwazvo iyi jerk inogadzirisa dura rewebhu kubva kuGNOME. Iwe unogona kutaura kuti haana zano rekufungidzira rezvaari kutaura.
Pindura kune sp0ke
Ichokwadi, iri zvese pa internet, asi haisi chiyero zvinosuruvarisa. Nekusaremekedza zviyero, ese kusapindirana matambudziko pakati pemabhurawuza aripo, semuenzaniso IE / Firefox / Chrome.
Kumisikidza kwakanaka, uye nekutenda kwairi unonakidzwa neInternet, komputa, uye zvese zvaunoita. Zvisinei, kubva kugobvu unoita zvakafanana kubva kuX. Zvisinei, kana iwe usingade nzira iyi yekushanda, usashandise Linux, nekuti kana iyo X ikatyora, waizoitei? kudzorerazve iyo sisitimu? -.
Ini ndinodzokorora kwenguva yetriliyoni, kuti vamwe vakatora kunzwisiswa kwemavara kusvika Kurume.
Ini HANDISI KUTAURA PAMUSORO PAKUSHANDISA KUSVIRA. NDINOSHANDISA IYO NGUVA YOSE. Chinyorwa chinotaura nezvevaya vanoita zvinhu nenzira yakaoma nekuti vakadzidza nenzira iyoyo makore makumi maviri apfuura, iye anoshandisa koni yezvinhu zvese, uyo anoramba achishandisa lynx kupinda muYouTube neGmail kana kuona mafirimu =)
Iwe uri chaizvo «basofia», uye zii izvo zvezvi xD
Ivo vanoshandisa iyo koni yezvinenge zvese (ini handizive chero munhu anoramba achitanga mateminari asina hushoma hwindo maneja pazasi) imo nekuti ivo vanoda kuenderera vachidzora zvese zvinoitika pane yavo system.
Maturusi "Akachena" anoitwa kuti aite basa ravo uye pasina chimwe chinhu, uye chero munhu anoda zvinhu zvaitwa nemazvo, anofarira maturusi eGNU akachena nekuti iwo ari nyore kushandisa uye anoshanda zvakanyanya pane zvavanoita.
Kune avo vanosarudza kuisa gumi zvirongwa zvehutsinye zvinodya 10GB ye RAM imwe neimwe, vachitora mukana we1% yezvavanogona ... ipapo nemufaro wavo uye nekutambisa zviwanikwa zvavo!
Kana iwe usingazive kutyaira, usatenga mota, kana iwe usingazive kurwa, usasvike kumberi kwenzombe ... Uye necomputer science, iwo iwo iwo mutemo unofanirwa kuzadzikiswa. , asi pachagara paine pringao yema pringao maitiro ekuita seyemurwi manolete ...
Ok N3RI unotanga kuzvipikisa uye usati waenderera mberi nekuparadza zvirevo zvisina zvazvinoreva uchienda kune YEMAHARA software nharaunda, ndinoda kukuudza kuti migove yakadai seUbuntu iyo yaunotarisisa zvakanyanya irimo ini ndinofunga kukwikwidza kupokana nemuenzaniso ndinobvunza kuti ndeupi anoshandisa mamwe macomputer software CHETE fadza vashandisi vako vekupedzisira, Hongu! kushamisika kukuru compiz (kwete kwandiri) zvinokuunzira chii? Iyo yakasviba cube iyo inoshandisa zvese zviwanikwa zvemuchina wako? Unoziva here kuti mangani "ma kesi" e "nei ndisina kamu yangu mu ubuntu" anouya kumaforamu? vanhu vaunoti zvechinyakare neimwe nzira, ndivo vanhu vakafanana vanoshanda mu n-chiuru * nix maforamu kuitira kuti vashandisi vanonyanyisa ve "akakosha desktop mhedzisiro" vanzwisise zvishoma nezvekuti zvinhu zvinoshanda sei.
Iwe unoziva nei kudzvanya kusiri kunyatsonaka zvachose? nekuti vashandisi vangangodaro VASINA kuverenga maparamende akasiyana kana akasiyana anozokanganiswa uye vanongopa kubvuma kana hongu!
Chekupedzisira, zvinoshamisira sei kuti unotanga kuzvipikisa uchishandisa mitsara yakadai sekuti "NDINOSHANDISA IYO YOSE NGUVA", ndinofunga ndiyo nguva yawakamira kunyora zvisina maturo uye kana uchida kunzwa senhengo yemahara software nharaunda, tanga kupa chimwe chinhu! zvikasadaro iwe hausi chimwe chinhu kunze kwekupedzisira mushandisi anodanura zvido uye anozviti ari wepachena software mushandisi ari kutevedzera uye kushandisa proprietary software, pasi penzvimbo yakasiyana neyakajairwa Windows! nekuti kana iwe usingazvizive, Yakavanzika Software yakakwenenzverwa, kuteedzerwa kana kuteedzerwa muFree Software Inoshanda Sisitimu, ichaenderera iri Private Software!
Zvisinei, chinhu chakanakisa chaungaite kuremekedza maonero ako kuomerera pairi uye pamusoro pezvose, kana iwe usiri kuda kugamuchira mazwi akashata, usashandise mazwi akashata, nekuti kana iwe uchinyora iwe unofanirwa kuzviita kuti vakurave, uye kana chero munhu akaverenga, anongowana zvinhu zvisingafadzi, iwe unotarisira kuti ndipindurei?
Byes @Ravenman, newewo fara. : P. Tiri pane iyo PlanetaLinux runyorwa? uu: P
Mashandiro esisitimu chishandiso chinofanirwa kuve chega kune mainjiniya. Munhu asingazive nezve izvi haafanire kutamba neakaomesesa software.
Vashandisi vekupedzisira vanofanirwa kushandisa masisitimu anotanga kunyorera anovabvumidza kuti vaite zvinhu, asi vasingazive kuti pasi pane chirongwa chakaomarara chavasingazive. Chimwe chinhu senge nharembozha dziri.
Zuva iro izvi zvichaitika, komputa ichasiyanisa vashandisi kubva kune nyanzvi uye isu hatizove nehurukuro dzakadai.
Zvino zvandinoona, pane typo, painoti "Alt + F2" inofanira kuti "Ctrl + Alt + F2" ... ndanga ndichitaura nezvekuvhura tty2 pane kushandisa graphic terminal (hwindo)
ndosaka kusanzwisisana kwakanyanya neizvozvo.
Acipe, ini handizvipikise, haugone kuverenga =)
Asati "shandisa koni" inoti "kune zvese." Ndiri kureva, ini ndichakutsanangurira iwe sezvo iwe usingakwanise kuzvinzwisisa ... zvinoreva iye anoshandisa koni YEMAZANO OSE ... kwete avo "vanoshandisa (isu tinoshandisa) koni"
Iwe unonzwisisa musiyano here?
Panzvimbo pekudzidza kushandisa unix ivo vanoda kuishandura kuita windows, saka tinoenda; Ini ndaive windows mushandisi kusvika nguva pfupi yadarika uye ini ndakaona kuti ndakanga ndadzidza zvakashata sei kushandisa anoshanda system, nekuti iyo system yaive shit; kubva pa XP ivo vanotanga kuita chakakomba zvishoma nekuti zvinhu zviri kuenda kugehena, vachishandisa manejimendi account yezvose, kuzvishora, nezvimwe. Zvichakuvadza zvishoma, asi Microsoft ichaita kuti inyorove.
PS: Zvinotaridza kunge vakaita sarudzo yakanaka muLXA, iwe wakaita sehove dzakaonda mumvura. Kwaziso uye makorokoto nemakumi masere nemasere akataurwa.
Zvinenge zvese unobvumirana nezvawataura; Chinhu choga chandinosiyana neDebian GNU / Linux… ini ndaikurudzira Arch Linux: http://oswatershed.org/.
Uye pakupedzisira, chinyorwa ichi chinowedzera kune yatove kunetsekana runyorwa rwe "junk zvinyorwa" zvaunazvo muLXA. Funga zvishoma.
Kwakanaka… splat, splat, splat… (ovation).
Ini ndinotsigira kufamba kwekushora pamusoro peTontUntu uye chinyorwa.
Ehezve, iyi ndeimwe yeiyo iyo zviyero zvinopfuura nepazvinogona; rombo rekusununguka uye kugamuchirwa kune maitirwo anoita kuti chinhu chimwe chisapindirane kuti ugone kutenga chimwe (icho chingangodaro chiri kubva kusangano kwaunofanira kubhadhara kodzero). Rusununguko harukosheswe chete nevaya vasina kumborasikirwa narwo. Kana Intr0 ichirwara nekukumbira kutevedzera zviyero, iwe hauzive zvachose pachinhu chimwe chete ... chii chichava chakaipisisa?
Zvisinei, chinhu chakanakisa chaungaite kuremekedza maonero ako kuomerera pairi uye pamusoro pezvose, kana iwe usiri kuda kugamuchira mazwi akashata, usashandise mazwi akashata, nekuti kana iwe uchinyora iwe unofanirwa kuzviita kuti vakurave, uye kana chero munhu akaverenga, anongowana zvinhu zvisingafadzi, iwe unotarisira kuti ndipindure chii? Kwaziwai!
Wandiita kuti ndibvise ngowani yangu kumhinduro yako ine simba, chaiyo uye ine nharo. (Kufa)
Iyi blog inoseka kwandiri, vese avo vasingafunge sevakagadzira vayo vanobatwa sevatroll.
Nezve iyo posvo, ini handibvumirane nemunyori, ndinogona kumurasira rumwe ruzivo ndobva ndataura, nekuti haaratidze kuti anoziva zvakawanda nezvenyaya iyi.
Nezve blog, kana pachinzvimbo chekushoropodza vanozvipira pachavo kuita chinhu chinobatsira. Huye, mazhinji ezvinyorwa haana kukosha uye anopa mashoma kudunhu. Zvinonyadzisa kuti pane mablog emarimi emoto akaita seaya.
kumabvazuva, saka usatsoropodza chete vanhu vane chekuita nekuvandudzwa kwesystem. Ndainyanya kugumburwa neichi chinyorwa. Uye parizvino… ndiri kuita gadziriso yeLinux netfilter module. Saka mhando iyi yemushandisi yaunoshoropodza ndiyo imwecheteyo mushandisi inoita kuti zvikwanise kuti utambe neLinux, WordPress, IPTables, MPlayer nevamwe. Dingindira rakavakirwa chete pakuremekedza vamwe, izvo iwe zvausingaite zvakajeka. Uye nezve Ubuntu, chirevo chakadai chinosiya kusahadzika kwakawanda ...
@esty: sezvauri kuona kuti uri murume asingabatsiri uye asingazive anozvifunga ane kupwanya kwekuziva-izvo-zvese ku "kuzvitsoropodza" (asi nezvevamwe vese) uye iyi hafu-bvudzi blog rinofanira kubviswa kubva ku PlanetaLinux link rondedzero.
Mwari haana chekuita neizvi uye ini ndinotumira 5 kana mamwe makomendi kana ini ndichinzwa saizvozvo uye zvinoita sekunge; Kana zvikaita sekuparadza zviwanikwa, iwe unofanirwa kuzvishora wega uye rega kutumira maonero evanokundwa izvo zvinongotungamira mukukanganiswa uye nhaurwa dzisina basa. Sezvo ini ndakakuudza kare mune zvimwe zvinyorwa: "Tora mutoro pane izvo iwe zvaunoburitsa."
Ini ndinokoka vatinoshanda navo veMahara Software Nharaunda kuti vasadzokere kune ino saiti iyo isingaite chinhu asi kuburitsa yakaipa mufananidzo nezve ruzivo rwedu uye kuyedza uye zvinoshamisira kuti vakapindwa muropa nechimwe chezvidimbu cheimwe yeakanakisa mashandiro masisitimu:Linux.
kuombera maoko kuombera Raveman! ino nzvimbo yakachena basophy.
Kana iwe uchizviona uri mushandisi wekupedzisira, saka fara kushandisa pendi bhurasho, solitaire, izwi, uye chero shit iwe yaunogona kufunga nezvazvo, zvinoitika kuti havazi isu tese takafanana newe uye kunyangwe tisina mainjiniya isu tinoziva kuti chirongwa chekushandisa chii uye isu tinogona kuzvishandura, dai iwe waive nezinga rehungwaru rakakodzera nhaurirano yakadai, iwe waizodzidza kusadzikisira vashandisi uye kurega kutaura zvakapusa zvinhu, wadii iwe chengeta yako pfungwa yekuti haina chekuita nazvo?
murazvo mukomana akadaro
Rarama kwenguva refu moto usingabatsiri hahahahahaha
Mr. BOFH naVaLusers havazombokwanisa kubvumirana.
Uku kutaura kunonyatsoratidza kuti iwe hauzive zvachose kuti chiyero chii.
Kutenda kuvanhu vakaita sewe, izwi rekuti "Technicoless" rakafanirwa kugadzirwa ...
N3RI handikwanise kuverenga? Ndinofunga haugone kunyora!
Nhanho iri nani yekubvisa nekuti hazvina kunaka kuzvidzikisira kumatanho akaita seako!
Kwaziso uye unakirwe neyako fucking cube.
Ndiwo maitiro esty. Uye pane chimwe chezviitiko chaunotaura icho chinonditsamwisa kunyanya. Imwe ye:
1. Mutsva mushandisi matanho pane Linux nharaunda nzvimbo kekutanga uye anobvunza maitiro ekuita chimwe chinhu
2. Mhinduro yekutanga mirairo yakati wandei kuti uwane
Ndokumbirawo magariro evanhu, ndokumbira unamatire mirairo yako kumusoro kwembongoro yako. Iwe haudi kuona kuti sekungoverenga kunoita mushandisi rairo, anoshevedza pringao yake yaanovimba kuti aisezve Windows. Uye kwete, usaedze kumuendesa kuti aende kudivi rako, kuti azive mashandiro anoita komputa kuti akwanise kuishandisa. Kana mumwe munhu akakukumbira kuti udzidze terevhizheni kuti utarise TV kana kutaura panharembozha yako?
Uye usandibate zvisirizvo: handisi kuti mirairo yakazvarwa yakanaka kana yakaipa; hapana. Asi ndiri kutaura kuti ivo havaenderane zvachose mushe nemamiriro ekushandiswa ne97% yevashandisi.
yakanakisa post ... ichokwadi kwazvo, ndashandisa linux kwerinenge gore ... asi ndinoziva zvekare linuxers ... uye chokwadi ndechekuti, ubuntu zvinoita kuti zvive nyore kushandisa komputa mune zvese zvinhu ... uye kana iwe funga kuti haina kukodzera, tanga wafunga kuti ndiyo magineti makuru kune ma linuxers matsva ayo anogara achitama kubva pawindows $ ...
Pindura kune infernus92
Iyo posvo yainakidza, zita racho rakandikurudzira kuti raizove nezve chimwe chinhu chakasiyana. (Ndakanzwa vamwe vachiona mavhidhiyo kuburikidza nekoni)
Ini ndinobvumirana chete nevashoma vakasimbisa kuti maLUG inzvimbo dzekutsvaga ruzivo, kana iwe uchitsvaga info painternet izvo zvishoma zvaunoda kuita kupedza nguva uchiverenga makomendi kumusana nezviso zvisina basa nekusimbisa.
Zvinorwadza iwe, uye zvinorwadza kuti vanhu vakaita sewe "ndeve" ve "linux" nharaunda yevashandisi
Zvakaipa kune vanhu ava vanongofunga kuti kupararira uye kuvandudza kwekomputa kucharamba kuri mumawoko emakomputa masayendisiti. Ini ndinotenda kuti GNU / Linux chishandiso chemahara, uye kuva wakasununguka zvinoreva kuti chero munhu anoda kuishandisa anogona kuzviita.
Ini handisi kuzosiya vese vashandisi veLinux vanoshandisa komputa kutumira maemail kana kutarisa YouTube mavhidhiyo, gamuchirwa. Zvisinei ... vazhinji vedu tinovashandira;)
Chero ani asina kushandisa windows kamwe chete muhupenyu hwake kukanda dombo rekutanga. Uye kana mumwe munhu akakanda dombo, haufanire kushoropodza windows usingazive kuti chii.
Uye seyekupedzisira tsamba ... ramba uchinyora mune yakajeka zvinyorwa, zvinoshungurudza kuona iyo &Xacute; kwese kwese.
Ini ndinobvumirana zvachose, ndine hurukuro kwese kwese nemhando idzi dzevashandisi ...
Ndivo vanopenda Linux sechinhu chakavharwa uye geek ... kana yanga isina kudaro kwenguva yakareba.
Ndiri chimwe chinhu senge muevhangeri, ndinoratidza mikana kushamwari nevatengi ... uye ivo vanoziva chii? pakupedzisira vanozopedzisira vagara ne linux .. kuitira nyore kushandisa.
Kuombera kwenyaya iyi, ndinonyatsofara matauriro asina kurongeka uye echokwadi.
Uye rimwe remazuva aya mumwe munhu anozofanira kushambadzira gwara pane "Maitiro ekupa mhinduro dzakangwara" kana "Sei kusaratidza hunyengeri hwako uchipindura"
Pindura kuna Y
Ndakamira kuverenga nema html maemail; ndipo pandakaona kuti uri benzi.
chikonzero chikuru nei html isingakurudzirwe pamazita ndeye: yakachengetwa.
Kana iwe ukatora nguva yekuita imwe tsvagiridzo, iwe waizoona izvo:
- hapana chiyero che multipart / mimes. zvinoreva kuti hazvigoneke kuziva kuti chikamu chega chemu email "chakafumiswa" ne html chinotanga nekuguma
- kupihwa izvo zvataurwa pamusoro, hazvigoneke kunyatso paradzanisa iwo mavara akajeka (kana akaverengerwa) kubva kumessage
- nekudaro html meseji faira kunonyorwa rinotaridzika senge:
Mhoroi munhu wese. Ndine dambudziko
Zviri nyore kuverenga? Kwete
Yakachipa kudura? Kwete
Pindura kuna nbensa
Handina kupedza kuverenga rugwaro. Handina kuverenga zvese zvakataurwa. Asi ini ndakaverenga pakati pemitsetse, uye ndinovimba ndizvo zvichaita hunyengeri.
Netiquette yakakwana, uye ini handisi kuzozvipembedza, nekuti ini handidi. Ini ndinobvuma zvizere kuti kushandisa html mune yekunyora tsamba ndeye NO. Nekudaro, ini ndinobvuma zvizere kuti kushandisa yakajeka zvinyorwa zvezvinangwa zvako pachako hazvina maturo. Kune nzira dzekunyora, mavara, zvisina kunangana, kupa meseji yechipiri, pasina kushandisa zvakapfuma zvinyorwa. Kufungidzira kwakakosha.
Nezve GNOME-Ita, ndinofanira kukuudza kuti iwe wakakwenya kumusoro:
Do.exe? Ini handidi kuve ne win32 inoitwa pane yangu pc. Ndatenda :)
Ndanga ndichishandisa Linux kwemakore matanhatu asi zvakadaro ndine shamwari dzakaishandisa kweanopfuura makore gumi neshanu, uye ndinogona kutaura kuti chokwadi chekuti iwe unoshandisa rairo yekuraira kumhanyisa zvirongwa hazvireve kuti wakura, asi zvinongoreva nzira yekushanda iyo inogona kutoita kukanganisa nekukurumidza kuoneka. Uye zvakare, nyasha dzeGNU / LINUX ndedzekuti zvese zvinogona kugadziridzwa semunhu angade kunzwisisa zvazvinoita, nekuti zvikasadaro tinenge tiri pamberi peOS mune yakanakisa manyorero aBill. Ndiko kuseka kwepenguin, kuti munhu wese anogona kuishandisa sezvavanoda, pasina kukiya mushandisi mune mameseji modhi kana graphic maitiro.
Ini ndinoshandisa GNU / LINUX uye MS, uye mune ese ari maviri mameseji modhi ine kukosha kwepamberi.
Dambudziko raunosimudza idambudziko rine vashandisi avo vakajaira windows uye vanoti Fedora yakanaka nekuda kwebara rerudzi rayo.
Zvakanaka, iwe wakawira muchinhu chimwe chete icho chaunoshora, ndiani anoda kushandisa mount, kana tsamba dzekutumira, dambudziko rako handizvo?
N3RI iwe wakawira mumuromo memhumhi.
Kuti fungidziro dzako diki dzinogona kunge dzichishanda asi kwete nenharaunda inokupfuura pane nyaya.
Chikamu chechokwadi chikamu chekunyepa, ndakaverenga zvimwe zvirevo zvandinobvumirana nazvo, iro danho revashandisi veGNU / Linux riri kuderera nguva pfupi yadarika, zvinosuwisa asi ichokwadi, kana iwe uchida kuita zvese graphical zvakanaka, asi zvaisazove zviri nani kudzoka kumahwindo avo?, nekuti nekuda kweavo vashandisi vanofanirwa kuenda munzira imwechete yeiyo Inoshanda Sisitimu? Kunyangwe chiri chokwadi kuti iwe haugone kumanikidza vamwe kuti vashandise iyo koni, ichokwadi zvakanyanya kuti kana iwe uchida kuziva zvauri kuita, nyangwe ita basa rekudzidza hushoma hushoma hweconsoon iyo yaunoshora zvakanyanya, zvinoita kunge ini kuti mumakore mashoma Tichava nevashandisi vakafanana neavo vehwindo vari kukwenya network, zvinosuwisa.
Kana iro ramangwana reGNU / Linux uye nerusununguko rwayo kunge seWinpuff, ini ndinofarira kubatwa munzvimbo yakanaka.
Takashata sei. Ndanga ndichishandisa GNU / Linux kweanopfuura makore gumi uyezve zvese zvese zvakaitwa neconsole. Asi nguva dzachinja uye imwe iri kuchinjika kunyaradzo uye kufambira mberi kwesystem. Kazhinji, vakwegura vanoramba shanduko uye vanoshandisa nzira yavo yavanofarira, kuregererwa: "Ini ndinoshanda nenzira yekare nekuti zviri nani, izvozvi havana chavanoziva." Izvi ndizvo zvinoitika munzvimbo dzese dzehupenyu, kwete mukomputa chete. Ivo vanotaura nezve zvipo kuFree Software nharaunda, zviyero, zvechinyakare tsika uye ini ndinokuvimbisa iwe kuti HAPANA weavo vakataura mune ino positi anokwanisa kunyora imwechete tambo yekodhi (nbense yako "dzidziso" yekuchengetedza mune zvinyorwa zvetsamba ndiyo chigadzirwa chemishonga). Ivo vanongodzokorora izvo zvavaverenga paWikipedia uye neapo neapo "nyanzvi" blog (ine Firefox zvechokwadi). Ivo zvakare vanotaura nezve Mahara Software, rusununguko uye vanokumbira posvo kuti inzwe… .in kuitira. Ini ndaisada matauriro epost post, asi makomendi… ..mama, tiri muchoto. Nenhanho iyi hatife takapfuura 2%.
Uye zvakabuda sei kana iwe usina? XD
Kungo wedzera kune makomendi zvinonzwa zvakashata kuti isu isu tinoshandisa ubuntu nekuti tiri kutiza kubva windows vanotiudza "Ubuntu kugoverwa kwevanhu vasina mari vasingazive kuwedzera 2 + 2." sp0l akazvitaura, ini ndaifunga kuti chikamu cheGNU / Linux chaifungirwa kuve chemahara uye sarudza chinokodzera chimwe nechimwe uye nekudaro chaive chinhu chinoremekedzwa uye kana uchishandisa koni pano ini ndinogona kutaura kuti kuravira kwacho kwakaputswa muhunhu mune wega Zvakandiomera sezvo ini ndichibva kusisitimu iyo isiri kushandiswa.
rombo rakanaka uye rarama kwenguva refu mweya wechokwadi wevavambi veGNU / Linux
Zvinosuruvarisa asi chaiko…
Hauna kumbofunga zvishoma nezve avo vakabatsira kunyora iyo sisitimu kuti iwe ugone kunakidzwa nenzira yaunoita nhasi? Isu tinowanzozviita nenzira yedu, isu chikoro chekare uye isu tinoyamwa zvakanyanya kubva kune vanotsvinya vanhu vakaita sewe zvekuti isuwo tora nguva yako kugadzira nzira yauchazoshandisa nayo uye izvo zvishoma zvevakarasika kugadzira mamwe maquaker anoshandisa Ubuntu. Saka tisiye tiri tega.
Pindura kuna eidast
Shandisa chaiyo distro, shandisa chaiyo Linux, gadza Gentoo, Debian, ini ndinotorega iwe ushandise fedora nekuti ivo vakomana vanopenga kuisa vechokwadi uye nemweya mapenzi vashandisi senge iwe pamucheto weiyo sarudza mutsara wehunyanzvi uye saka ivo vazive zvavari akagadzira hukuru hukuru, havakwanise kuchengetedza orgasm mushure mekuita ALT + F3 nekuti ivo vanoshandisa Bubuntu uye ivo vanofunga ivo vari makore zana pamberi peWindows. Nguruve dzinonwa kofi yakawandisa uye ndinokutendai kuva nenguva yekuhura mukadzi wako nekuti isu tanga tisisina nguva yekuhura amai vako nekukuunza iwe pasi nekombuta iri pasi pedu maoko, mahombe guevones.
Zvirokwazvo salami ine zita rayo muH1 sechiratidzo chayo mu6 mavara akasiyana. Ndokumbirawo usablogi zvekare.
Semazuva ese… .. kushoropodzwa kwe linux ne linuxer kunogaromutsa kwakanyanya muTaliban. N3RI ... haukodzeri kushandisa Linux ... iwe unonyadzisa rudzi urwu runokudzwa: P.
Zvakaipa unowana vanhu vakapusa semunyori wenyaya iyi. Zvingave nyore kuisa Windows 7. Ah uye Ubuntu inoyamwa !.
Kwandiri, ramba uchituka zvese zvaunoda kushambadzira infinitum (kana ini ndakaramba ndichituka, nekuti ini ndinowana kunzwa kwekuti makomenti mazhinji akasiiwa nemunhu mumwe chete arikuitawo zvakafanana pablog rangu)
Ini handina kunetseka nezvingataurwa nemutorwa zvachose nezvangu
… Vanosimbisa chete zvinotaurwa nechinyorwa.
N3Ri: - kuti ivo vanofamba-famba uye vanotsvinya, ndizvo zvinoitika kana usati wakambozviisa kana kana vakadzi vekupedzisira vawakarara navo vachinzi "Jpeg" na "Avi"
Acipe: enda kugehena nemaoko ako maviri ekuti kana iwe uchingova wekupedzisira mushandisi, maonero ako ari kufashukira!
- ndinofunga inguva yekuti umire kunyora bolude »C» es
Vanhu kana isu tichiremekedzana zvishoma uye tichidzivirira kumwe kutaura kusingafadzi senge apfuura? Ndiko kunetseka kwazvakaita nharaunda kufambira mberi. REMEKEDZA kutanga pane zvese ndapota!
Pindura kune darkzzzzz
N3ri unosiririsa pseudo juaker =) Linux haisi yako, hauna kuzvifunga here?
zvishoma-musoro asi baba venyika (yeMexico) yauri kureva ndiMiguel Hidalgo uye uyo ane chirevo chakakurumbira pamusoro pekuremekedza kodzero dzevamwe ndiDon Benito Juárez, angangoita makore makumi mashanu akasiyana
Pindura kune rems
Kunyangwe ini ndichinyatsoda Linux uye yemahara software, ndinofunga isu tese tinofanira kubvuma chokwadi.
Panguva ino hazvina basa kana KDE XP kana GNOME Milenium ikabuda. Linux payakave nemukana wekuwana imwe chikamu chemusika pane desktop, yakatambisa nguva uye nesimba kudzokorora basa ratove kuitwa. Dai KDE neGNOME vakashanda vakabatana kuti vape Linux nharaunda yedesktop, isu zvirokwazvo tichava nehunhu hwakajeka mushandisi mushandisi. Asi pachinzvimbo isu tine miviri yekuyedza kuyedza iyo isingakwanise kushandiswa kunze kwekunge uine 1Gb ye RAM uye nguva dzese mupasi kugadzirisa iyo saver saver.
Kunyange zvikwata zvese izvi zvakarwa zvechihwana, Microsoft yakasimbisa chinzvimbo chayo semutungamiriri muhofisi yemakomputa yemahofisi nekupa vashandisi izvo zvavakakumbira: intuitive graphical mushandisi interface inovabvumidza kuti vabudirire pasina kubata nemusoro bhuku (Huru seBhaibheri!) kubva vi kana kubva kuTeX.
Uye kwete izvo chete, M $ yakaunzawo nyore kushandisa uye kugona kunoratidzira zvigadzirwa zvayo kumaseva neiyo itsva Internet-yakanangana nehurongwa hwekushandisa Windows 2000. Izvi zvine mhedzisiro yekuti semakambani anowedzera kugadzirwa kwavo uye purofiti; UNIX neLinux vari kutiza vachipesana nedzimwe misika.
Zvinoita sei kuti makambani asashandise Windows 2000 pachinzvimbo cheimwe mhinduro dzeshareware? Chero maneja anoziva kuti mukufamba kwenguva zvakachipa zvinodhura. Kubudikidza nekunyatsoongorora, ongororo dzakawanda dzakaratidza kuti mutengo wese wevaridzi wakakwira muLinux uye UNIX masystem, kunyanya nekuda kwekushaikwa kweyakajairika dzidziso uye masisitimu masisitimu evashandi vanoshanda aya mapuratifomu.
Sezvatakadzidza munguva pfupi yapfuura, National Autonomous University yeMexico ichatevera hunyanzvi hweMicrosoft .NET chirongwa, ichiteverwa nevamwe kune dzimwe nyika. Iko kune kunyange mukana wekuti munda weakavhurika sosi software uchapindirwa uchishandisa semi-yemahara mapurojekiti senge Trojan mabhiza, sezvazviri naMono naDotGNU.
Zvese izvi zvinotumira meseji yekuti nepo mahara software ine nzvimbo yayo, zvirokwazvo haisi pamasevhisi ekugadzira emakambani makuru, uye kunyangwe zvishoma munzvimbo dzekutsvagisa nedzidzo, kuti matekinoroji emangwana ari kuyedzwa nhasi.
Kana Linux uye yemahara software kazhinji isingarwire demokrasi mashandisiro ayo kune ruzhinji rwevanhu, tichakurumidza kuona chiratidzo chenyika yekomputa yakagovaniswa naBill Gate $, Richardo Stalinmal, Steve Yobs, pakati pevamwe, ichizadzika: A unoda kuti ndikupe mvumo yekuenda kupi nhasi?
Mhoro munyori anodikanwa, ini ndichakuudza yangu chaiyo nyaya, ndinobvumirana newe zvakanyanya, asi, zvinoita sekunge ini iro zano hombe, semuenzaniso mune "plain text mail", zano nderekuti munhu wese anogona kugamuchira uye verenga pasina zvinetswa, nekuti izvi zvinowirirana neshanduro nyowani uye dzekare dzevatengi vetsamba, uye ini ndinogovanawo maonero ako maererano nekutsiurwa kunogamuchirwa muzvinyorwa uye nenzira yakaipa yavanozviita nayo, asi iwe unofanirwa kunzwisisa varombo vasina mufaro, kuti Vakamutuka pandinopinda murondedzero uye anofanirwa kuramba akanyarara kusvikira nyowani yaita seinozvidza uye inotorwa nekuti haashinga kuzviita nevakuru (izvo kufunga zvakare), uye kupedzisa, ini ' ll ndikuudze Hazvibatsiri kushandisa iyo yekuvandudza maneja uye ini ndinogara ndichida "apt-tora inogadziridza", asi zvakadaro handizvinyime ini nezvinhu zvitsva uye zvakanaka izvo linux ine, yakanaka kwazvo posvo, kwaziso uye rombo rakanaka
Anodikanwa kuti zvakanaka kuti pane rusununguko rwekutaura, asi zvakare zvakanaka kuti vanhu vazvizivise ivo vasati vataura, nekuti munzvimbo zhinji pasi rose hurumende iri kutanga kushandisa Linux (unoziva nei?, Nezve chokwadi chiri nyore: ivo vanoziva zvinoita yako pc uye isingarwadzi), pamwe nemaseva makuru uye akasimba pasirese anoishandisa uye nevanhu vanoda pamba pc inoshanda mushe uye haifanirwe kuidzosera iyo yega 3 mwedzi (nekuti izere nemarara uye inokurumidza kuona huswa huchikura pane kutanga windows), vanoishandisa, uye pamusoro payo handizive zvaunoreva ne "Decent Interface", kwandiri mamwe ma transparencies kana kuvhura mhedzisiro yakabiwa kubva ku "Compiz" hazviite senge kwandiri izvo zvinoita kuti tafura iwedzere kana kushoma.
Zvese izvi zvinotumira meseji yekuti nepo mahara software ine nzvimbo yayo, zvirokwazvo haisi pamaseva ekugadzira emakambani makuru.
heh heh, ndinoziva mienzaniso inopesana neizvi
tuxis wakambove mune ino yemahara software nerd munguva pfupi yapfuura?
Kuverenga imwe uye kuwedzera ...
Alexander Santos akadaro
Wataura chokwadi, kune vanhu vanonyanya kufunga uye vanofunga kuti vanoziva zvakawanda nezve chimwe chinhu.
Pindura kuna Alejandro Santos
Nei hutsinye? wadii zvirinani kukoka kuti uedze chimwe chinhu chiri nani pane ubuntu, ndipe nharo dzinokurudzira vanhu uye kwete kungotsoropodza, kana ini ndichishandisa ubuntu nekuti, izvo zvinokurudzirwa mumaforamu uye wozotora nhanho kuna (baba vake) Debian uye zvakadii zveguevones uye vamwe vanonditenda kuti kwandiri hazvishande uye nekushandisa ubuntu handifunge kuti ini ndatoziva zvese nezve linux iwe uchaziva zvese nezve linux asi semunhu ndinofungidzira uri….
“Chimwe chiratidzo chekugara munguva yakapfuura kurarama kunyunyuta nezvezvino. Uye uyo aripo mulinux anonzi Ubuntu. "
Wataura chokwadi, Linux haisi Ubuntu, inova imwe yeiyo distros iyo yairi kuwana mukurumbira yakasiyana, uye chinyorwa chakange chakandinakira kusvikira ndaverenga kuti ahggg ... ipapo, iwe wakachishandisa.
Pindura kune ashketchum
Francis Fernandez akadaro
Ndakafarira chinyorwa kusvika ndaverenga "iyo iripo yeLinux ndiUbuntu".
Sezvo iwe wakatsamwira vashandisi veLinux vanogara munguva yakapfuura, ini ndakatsamwira vanhu vanotenda kuti Ubuntu yakagadzira zvese.
Iwe unongofanirwa kuyedza yakawanda yakasimbiswa distros saMandriva kuti uone kwavo nyore kwekushandisa uye kugona.
LINUX HASI UBUNTU.
Ini ndinokukoka iwe kuti uedze mamwe ma distros akadai seMandriva, OpenSuse, nezvimwe. uye muchaziva zvandinokuudzai.
Kana kuita kwakawanda kuziviswa kweCanonical brainwash yakawanda yenharaunda yeLinux?
Ubuntu haina kushata, yakawanda, ndeimwe yeakanakisa, asi kuchengetedza kuti ndiyo iriko yeLinux ...
Pindura kuna Francisco Fernandez
Tsigiro yaFrancisco uye akati wandei apfuura. Chinyorwa chakanakisa, asi Ubuntu hachisi chinhu chose ... kutaura zvazviri ini ndiri kupokana neiyi distro nekuti nguva pfupi yadarika vanoisa pfungwa pachikamu che "vhezheni nyowani mwedzi mitanhatu", iyo dzimwe nguva inokonzeresa shanduro dzine zvakawanda zvembug (6.xx ). Ini parizvino ndinoshandisa CentOS neMandriva kubasa uye Debian yekuzorora uye pamakumbo angu… Kunze kweizvozvo, chikuru chinyorwa!
hehe xD ibatirira iwe N3ri, asi baaah ipapo ini ndiri wekubira linux mutambi kubva zvakapfuura asi zvakakodzera mupiro wako, sekukuudza kwandinoshandisa MUTT xD…. Kwazisai uye chevere k ipai maonero enyu Ini ndanga ndichive nenyika huru kwemakore SOFT LIBRE
Ini ndinoshanda mune imwe kambani uko kwatinoita nhamba hombe yemaseva e linux, zviri pachena kuti ma distros edu ari Linux uye zvakanyanya kukuzvidemba uye kuti "ubunter" pfungwa yekuti kushandisa koni yakawandisa, ndinofunga uri kurarama mukukanganisa kukuru kwazvo. Iyo console inokununura kubva pakushandisa inopfuura gumi mirairo mune yemavara edhita, spreadsheet etc.
Asi muchokwadi chinonyanyonetsa ipfungwa yekunyepa yekuti ubuntu ndiyo iripo ye linux, pamwe nehunyanzvi nyanzvi yaunoti iwe uri, iwe unonyatso ziva kuti kukura kwayo kunobva ku DEBIAN uye kuti vanongo gadzira chete. Izvo zvinonyadzisa kuti linux pseudo mushandisi anonyora nenzira iyoyo, isu takasununguka kusarudza iyo OS iyo isu yatinoda, asi haina kukupa iwe mvumo yekuti yemakore ako gumi - iyo isingandiudze chero chinhu- iwe unotenda kuti unoziva Zvese uye uve neMusengwa wekutaura kuti zvakanaka kana zvisizvo.
Pindura kuna shaka
«Zvinonyadzisa kuti linux pseudo mushandisi anonyora nenzira iyoyo, isu takasununguka kusarudza OS iyo yatiri kuda, asi haina kukupa iyo mvumo yekuti kweako makore gumi - iyo isingandiudze chero chinhu- iwe unofunga kuti unoziva Zvese uye ndine chisungo chekutaura kuti zvakanaka kana kuti zvakaipa. "
"Pseudo mushandisi" yakarira zvinehunhu ... chinhu chinonyanya kufarira ndechekuti izvi ndizvo chaizvo zviri kutaurwa nechinyorwa.
Kushaikwa kwepabonde kwakatenderedza pano kunotyisa ...
Saka ... ini handichanzwisisi. Ini ndichafanirwa kudzokera ku windows $ nekuti ndinozvidzwa nekushandisa ubuntu, sezvo ndiri zvakare mushandisi mushandisi, asingape chero chinhu (ini ndinongounza matambudziko kunharaunda) uye nekudaro ndiri gomarara.
Ini handisi kufarira zvese zvinotaurwa neN3RI, ndoda toni yakashandisa iyo neimwe nzira kugumbura vanhu vazhinji, nekuti zvakataurwa zvakandiita kuti ndione kuti aive akarasika zvese munharo dzake uye nenzira yake yekuzvitaura, asi ini ndinogovana kushungurudzika kwake pamabatirwo akaipa atinogamuchira kubva kuvanhu vaanoreva.
Milanese troll akadaro
N3ri uye muvhareji mushandisi, kenza iri kuuraya Linux.
Che naCristina y Cobos, ivo vanofungei?
Pindura troll milanesa
heh he he he he
ole uye izvi ndakanyora mune yakajeka mavara XDDDDDDDDDDDDD
Kufanana nekumwe kukurukurirana kweichi chimiro, zvese zvinoenderana nemaonero ekuona. Zvakare mbiri iyo iyo usr inoda kuwana ... kune yangu chikamu ndinonzwa kugadzikana mukoni, ini ndinoshandisa iyo muyero unoratidzika kunge wakakodzera nharaunda yega yega. asi zvandiri kureva neizvi pane zvinhu izvo nekuzvishandura iwe kutadza kuzvidzora ... ini chete ndine izvo zvinopesana ne "nyowani" ...
kubudirira .. chinyorwa chakanaka kupokana kwakanaka
Pindura kune ZvakasvibaMweya
Ini handizive kuti ndaizoitei pasina iyo koni.
Makore gumi ... chokwadi.
Ndichiri kushandisa gomo XD
uye chii chiri kuitika kudanana ne ubuntu kana chii? XD
Pindura kune @TsunamiBoom
unogona ndapota kugadzirisa typo? Iko painoti "Alt + F2" inofanira kuti "Ctrl + Alt + F2"
Inopa nyonganiso. Ndatenda.
Ini ndogona kutofungidzira ava ñulinux vanokoshesa zvinhu vachisvika pahofisi uye vachichema kuti havagone kuvhara kabhuku kemagetsi mune sosi yemagetsi nekuti mapurgi haasviki nematanho eIO sezvaanoiswa pakureba kusiri iko.
Ini ndinobvumirana nezvinhu zvakawanda, uye kunyangwe ndichiri kushandisa koni yezvinhu zvakasiyana, ini ndinoshandisa guake kana Yakuake. Handina kuverenga zvese zvakataurwa, asi ndinofungidzira kuti "yekare-chikoro Linux" ichauya kuzogunun'una. Chaizvoizvo, tsamba dzekutumira haisi iyo yakanyanya kunaka nzira yekuwana rubatsiro, foramu inogara iri nani (hongu, kana iwe usina kuwana blog yakataura maitiro ekuita zvaunoda kuita), asi sekutaura kwako unofanirwa nyatsoziva zuva repositi.
Kwaziso kuvashandisi vemazuva ano linux.
PS: Kumupengo uyo akataura kuti tinodzorera windows linux, ndinokukoka iwe kuti ushandise LFS, kuti uone kana chiri chokwadi kuti unoshandisa linux.
Zvakanaka, mandiri ndakarasikirwa nemukana wekutora chikamu mumaforamu ekukurukurirana nekuti server inofara inoramba meseji muHTML uye ivo vanozvipindura vo
"Chokwadi server yako yemahosi inofunga kuti watumira meseji asi ..." uyezve yakawanda yakawanda yebhuru pamusoro pezviri pachena zvinyorwa zvinopesana ne html ... "Die outlook!"
Asi kana ndikasashandisa maonero uye tsamba yangu yebasa haina chero mukana wekutumira mameseji chete.
Mhedzisiro yacho ndeyekuti ini ndakanyimwa kutora chikamu mumusangano uyu apo ini ndinogona kungogamuchira mibvunzo nekucherechedza mhinduro dzevamwe, asi handigone kutora chikamu.
Hakusi kuti havatarise manzwiro angu (zvino akuvara)?
Kana kugona kugovera ruzivo rwangu, kana kuita kuti nhaurirano iite nhanho, ndaitadza kutora chikamu (mutemo 1, 6, uye 7 zvirinani).
Saka netaki mambure yakatyorwa mukutsvaga iyo mambure tag, ini ndinongo enda kwavanoda ini.
Ini handina kana kuisa zvinoshamisa zviso, mavara kana mafonti. Kuedza kwangu kutora chikamu chaive chinyorwa chisina kujeka asi zvinouya kwavari mune imwe fomati. Asi ini handikwanise kunzvenga izvozvo, pane zviri nyore network masevhisi asina iwo sarudzo kumashure, hapana nzira!
Kana iwe ukajoinha runyorwa rwekutumira, pane kumisikidza yako mitemo, iwe unofanirwa kunamatira pairi.
Dai vanga vatogadza, chero chikonzero, iko kushandiswa kwemavara mameseji, uye iwe ukanyora tsamba retsamba kekutanga, iwe unofanirwa kuremekedza zvakajairwa, uye usasvike ipapo muhurongwa «tsime ndinoramba ndichitumira html nekuti ini buda mumazai angu », handisi kuzviona zvakanaka ..
@Juan Carlos: Ndeupi mutengi weemail waunoshandisa? MuThunderbird semuenzaniso, kana iri yako nyaya, tarisa mu "Hora -> Zvaunofarira" menyu, tinya pane "Kunyora" tebhu uye mu "General" sub-tab tinya bhatani re "Kutumira Sarudzo".
Pane ino skrini, sarudza sarudzo "Chinja meseji kuve pachena mavara" muchikamu chepamusoro, uye muchikamu chezasi, tinya pane "Plain mavara matunhu" tab uye tinya bhatani rekuwedzera.
Mubhokisi rebhokisi rinowoneka, wedzera dura rekero reemail revanhu vaunoziva vanongoverenga zvinyorwa zvakajeka. semuenzaniso, kana email yako iri pepe@eldominiodepepe.com ipapo mubhokisi iri iwe unongofanira kunyora: eldominiodepepe.com
Ini handina kufunga kuti kune vanhu vane udyire munharaunda ye linux zvekuti nekuti ivo vanoshandisa chete zvinyaradzo zvavanofunga kuti ndizvo zvakanakisa, ini ndinonyanya kushandisa koni uye mbeva haina musoro kushandisa koni yekuisa forefox kana iwe unayo mupaneru asi kana ini ndichiona zvine musoro kuishandisa kuisa pasuru yega yega sezvavanoda…. Ini handinzwisise zvachose nekuti kune vanhu vanogumbuka nekuti kune distro ine hushamwari mifananidzo yakajeka uye nekuda kwekuvapo kwe newbies muLinux kana pamwe avo vakazvarwa pano vachishandisa koni kana ivo vasina kumbozvidzidza ... ndeumwe udyire xq nharaunda inokura (haufanire kufara) uye unovaita kuburikidza distro senge ubuntu, mandriva uye mint ..
Pindura Puchete Jose
Kupinda kunonakidza kwazvo
Kuti munhu anogara achishandisa iyo terminal anotsoropodza mumwe nekushandisa ine hushamwari graphical nharaunda chiito chinogona kungouya chete kubva mukusaziva kusaziva.
Izvo zvinoitika kana munhu anoshandisa inoshamwaridzika graphical nharaunda akatsoropodza mumwe nekushandisa chete terminal.
Linux ndeyekusiyana, wese munhu anoshandisa zvavanoda. Izvo hazvifanirwe kuve nebasa, asi ratidza kuti munhu wese anogona kuita zvavanoda neiyi sisitimu yekushandisa.
Rega mumwe nemumwe ashandise chero chaanoda ... PAMUSHA. Asi pane runyorwa rwekutumira ... kune vashandisi vazhinji, uye nekudaro iwe unofanirwa kutevedzera mutemo. Uye kana mirau ikati kwete HTML, inoteverwa ... uye nekudaro vese vashandisi vanoremekedzwa.
Kana muforamu vashandisi vanofanirwa kunyora chete neHTML, zvino zvinoremekedzwa.
Iwe haugone kuenda kunzvimbo uye usingaremekedze mitemo.
Ini handisi kufarira avo vashandisi vanopindura nekunyomba, vangave vari vekupedzisira kana graphical vashandisi venharaunda.
Ini pachangu, ndapfuura nguva kubva pagrafiki nharaunda kuenda kune yekupedzisira nharaunda ... uye kana mumwe munhu akandiudza ivo kuti vanoda kudzidza, chinhu chekutanga chandinoita kuisa inoshamwaridzika graphical nharaunda pairi. Kana ichitonga chimwe chinhu. Ini ndinokuratidza sarudzo, uye iwe sarudza yaunoda.
Nekuti ndiyo GNU / Linux: rusununguko.
Ini ndatova kurwara nevashandisi vasingazive mashandisiro eiyo terminal kutsoropodza avo vanozviita, uye vashandisi vasingade mifananidzo vanotsamwa nekuti mumwe munhu anoishandisa.
Iko kusaziva kusaziva.
Pindura ku feror
Iyo PEDANTRY ye linuxero inopfuura kupfuura zvandinofunga. Kwandiri zvakakosha kuti uve nepfungwa dzakavhurika uye nekutarisa zvinhu kubva pane yakanyanya kunangana nzvimbo inogoneka. Ndakave neWin neLinux pakombuta imwe chete kwenguva yakati rebei, uye chokwadi ndechekuti, handina kana kuvhura Linux zvachose, nekuti paunotanga kutsvaga mapurogiramu ehunyanzvi, unongowana underpro software. Ini handina basa nezvikonzero, nyaya ndeyekuti kana iwe uchida kuita chirongwa, chero bedzi usingapfuure nepamahwindo, unazvo zvakajeka. Semuenzaniso, ndinoziva Max3D, Maya, Blender, Joudini, UnrealEngine, SandBox, ChromEd uye Kubatana, nekuti muLinux iwe unongokwanisa chete kushandisa UEd mune zvinorwadza shanduro, Blender uye Kubatana (chimwe chinhu chinhu). Iyo poindi ndeyekuti ini handigoni kugadzirisa "chimwe chinhu", uye kunyangwe zvishoma kana ndichigona kuwana zvese.
Chinoita kuti system ive yakanaka haisi iyo system, asi zvirongwa zvaunogona kushandisa, zvirinani ndizvo zvandinofunga uye ndizvo zvandinoona mukuita.
Iyo PEDANTRY ye linuxero inopfuura kupfuura zvandinofunga. Kwandiri zvakakosha kuti uve nepfungwa dzakavhurika uye nekutarisa zvinhu kubva pane yakanyanya kunangana nzvimbo inogoneka. Ndakave neWin neLinux pakombuta imwe chete kwenguva yakati rebei, uye chokwadi ndechekuti, handina kana kuvhura Linux zvachose, nekuti paunotanga kutsvaga mapurogiramu ehunyanzvi, unongowana underpro software. Ini handina basa nezvikonzero, nyaya ndeyekuti kana iwe uchida kuita chirongwa, chero bedzi usingapfuure nepamahwindo, unazvo zvakajeka. Semuenzaniso, ndinoziva Max3D, Maya, Blender, Joudini, UnrealEngine, SandBox, ChromEd uye Kubatana, nekuti muLinux iwe unongokwanisa chete kushandisa UEd mune zvinorwadza shanduro, Blender uye Kubatana (chimwe chinhu chinhu). Icho chokwadi ndechekuti ini handigone kugadzirisa "chimwe chinhu", uye zvishoma kana ndichigona kuwana zvese.
UYE HAZVISI ZVAKO ZVEKUDYA?
Generalize uchiti "linuxeros", kana zviuru kana mamirioni avanhu vari chikamu chemunharaunda zvakananga kana zvisina kunangana, uye zvichisiyana zvakanyanya pakufunga pakati pavo.
Ndinoda kuziva kana iwe uine chaicho chekutanga Windows rezinesi, kana iwe uri mumwe wevaya mapenzi avo vanotenda kuti vane mvumo yekusaibhadhara peso yacho (kuti iwe uigadzirise mahara), uye kunyangwe zvese tenda ivo vadziviriri veMicrosoft.
Kuva nepfungwa dzakavhurika kunoreva chete kushandisa Yakavanzika Software, iyo chete avo vane mikana yezvemari vanogona kuitenga, uye kunyangwe zvakadaro, ivo havagone kuziva kuti gehena kodhi yechirongwa chega chega inei (vane mukurumbira ndivo vekumashure vane masystem senge Windows, izvo unganidza ruzivo rwatisingazive nezve makomputa anorishandisa).
"Pfungwa ndeyekuti ini handigoni kugadzirisa 'chimwe chinhu', uye kunyange zvishoma kana ndichigona kuwana zvese." akadaro. Zvakanaka, uye iwe unofunga kuti une "zvese sei." Handifunge kuti unobhadhara rezinesi kune yega yega uye yakabhadharwa chirongwa chaunoshandisa, saka, iwe uri akavimbika mudiki pirate uyo anongoziva nzira yekuburitsa kutsemuka uye ma serial kubva pamapeji ari kufaya, kurodha zvirongwa zvine hutachiona neTrojans (uye usadaro ndiudze kuti kungovapfuudza antivirus kuti vazive kana vaine kodhi yakaipa kana kuti kwete), kuwira mubasa rinoitwa nevagadziri veOS yega yega (ehe, Private Software inoda kushandira vanhu uye kuvabhadhara muhoro, uye ndozvinoita iwe shit pavari, sezvo «Nyaya yacho ndeyekuti ini handigone kugadzirisa" chimwe chinhu ", uye zvishoma kana ndichigona kuwana zvese.«, uyezve haukwanise kushandisa Mahara uye / kana Mahara dzimwe nzira, idzo kazhinji dzino zvakafanana kana kupfuura zvakaenzana kubhadhara.
Nenzira, kana iwe uine chidimbu chekumhanyisa Windows zvirongwa zvakanyanya (kuti rutsigiro rweizvi paLinux / Unix harutsamire pamasisitimu aya, asi pane iyo yakagadzirwa neSoft, kana pamwe hauzive kuti iyo yakakura mazhinji emaseva uye masystem ekutsvagisa anoshandisa Unix-Yakavakirwa masystem), unogona kushandisa zvirongwa senge Waini (iyo inoshanda nemapurogiramu mazhinji) kana kushandisa muchina chaiwo, kana kungoita mbiri-bhutsu, kudzorerazve kuchinja OS pazvinenge zvichidikanwa.
Zvichakadaro, ndakaramba ndichigura nekusvibisa nharaunda umo vazhinji vedu tinoshanda pamwe chete kuita zvakanaka, kunova kushandisa masisitimu anoremekedza rusununguko rwevashandisi vavo. Zvichida "kubhadhara" kwako kuMicrosoft kune zvigadzirwa zvavo zvepirati ndiko kunanzva bhutsu.
Gadzira uchiti "linuxeros", kana zviuru kana mamirioni evanhu vari chikamu chemunharaunda zvakanangana kana zvisina kunangana, uye zvichisiyana zvakanyanya pamaonero kubva kune mumwe nemumwe.
"Chokwadi ndechekuti ini handikwanise kugadzirisa 'chimwe chinhu', uye kunyangwe zvishoma kana ndichigona kuwana zvese." akadaro. Yakanaka kwazvo, uye iwe unofunga sei "unayo zvese". Ini handifunge kuti unobhadhara rezinesi kune yega yega uye yakabhadharwa chirongwa chaunoshandisa, saka, uri akavimbika mudiki pirate uyo anongoziva nzira yekuburitsa kutsemuka uye serials kubva kumanyepo mapeji, kurodha zvirongwa zvine hutachiona neTrojans (uye usadaro ndiudze kuti kungovapfuudza antivirus kuti vazive kana vaine kodhi yakaipa kana kuti kwete), kuwira mubasa rinoitwa nevagadziri veOS yega yega (ehe, Private Software inoda kushandira vanhu uye kuvabhadhara muhoro, uye ndozvinoita iwe shit pavari, sezvo "Nyaya yacho ndeyekuti ini handigone kugadzirisa" chimwe chinhu ", uye zvishoma kana ndichigona kuwana zvese.", Uyezve haukwanise kushandisa Mahara uye / kana Mahara dzimwe nzira, idzo kazhinji dzino zvakafanana kana kupfuura zvakaenzana kubhadhara.
Iwe unoona ... kwete kuti ndinodzivirira Robin asi iwe watofunga kuti anoshandisa pirated software nekuti anoshandisa zvivakwa zvirongwa. Muchokwadi ari kuti iye ane ese mashandiro ekuisa akaiswa, asi kuti pane zvirongwa zvaanoda kuti amhanye muWindows uye kana zvichikwanisika kuti aite kudaro, haufanire kumugumbura nenzira iyi sezvo ini ndanga ndiri munzvimbo yake uye ari pachokwadi, kune akawanda mapurogiramu anongoshanda paWindows kana OSX, kana ari eimba uye ari nani kupfuura mamwe emahara kana aunofanirwa kuashandisa nekuda kwenzvimbo yaunoshanda. Saka matipi matatu: dzidza kuverenga! Usangozvivhara iwe kune yako nyika yezvinodiwa uye dzidza kuremekedza !!!
Unogona kunge uchitaura chokwadi, asi zvishoma, sezvo "Iyo PEDANTRY ye linuxero inopfuurira, ndinofunga" zvinoita kwandiri kuti kuri kuisa munhu wese muhomwe. Ini ndiri "linuxero" uye ndinoziva vanhu vakati wandei varipo, kungave kana vega, uye nekutitaurira kuti tiri kurwiswa. Kana iwe ukatanga nehasha dzakadai, haugone kutarisira kuremekedzwa kwakawanda.
Kutenda nekupindura, zvakanaka kukurukura zvinhu izvi, ndomaitirwo aunochinjana nekudzidza;)
Izvo hazvitaure zvakanaka nezvemunyori weblog rino, uyo anosarudza kuti ndeapi makomendi ekusiya uye ekudzima Ini ndanga ndanyora imwe uye vakaidzima. Chaizvoizvo kufarira kweblog kwakange kuri kwekungomutsa kunyanyisa nekukakavara, naiyewo, iye wemunyori, anopenga uye anofungidzira
Ini ndinowana ichi chinyorwa chakanaka kunonoka. Zvakanaka, kupfuura chero chinhu chandaida kuendesa yangu yekuona maonero zvichienderana nezvangu zvakaitika. Ndanga ndichishandisa GNU / Linux kwemakore masere uye ini ndinobatsira nyowani pese pandinogona, pasina zvidhina.
Pakutanga ndakanga ndisingazive maitiro ekuisa chirongwa, uye yangu yekutanga distro yaive Debian 6 (ndinofunga ndinorangarira). Ndakaona kuti yakanga isina odhiyo, isina madhiraivha ane 3D mhanyisa ... ndaifanira kuisa zvese nemaoko. Ikoko ndakadzidza zvishoma. Pandaifanirwa kuimisa mushure me "kuputsa" zvinhu zvakati wandei, ini ndaida kuyedza Ubuntu uye zvaive kushamisika kukuru: system ine zvese zvakagadzirirwa uye kuiswa kutanga kuita zvandinoda.
Uye izvo zvaive zvakanaka kwazvo. Asi makore akazotevera ndakachinjira kune yewebhu programming uye ndakazojaira kushanda (programming) ine dema kumashure uye chena zvinyorwa, izvo zviri nani kumeso angu, maziso angu haanete. Uye kuva akatendeseka nezvangu zvakapfuura, ini ndanga ndato shanda pa2D CAD dhizaini dhizaini (zvakare dema kumashure uye mavara mitsara). Ini ndakazviwana ndagadzikana kuronga neiyo nhema kumashure, zvese muNetBeans uye mune Sublime Chinyorwa.
Zvakanyanya, zvekuti ndakawana imwe kuravira pakushandisa iyo terminal, nekuda kwezvikonzero zvinoverengeka: Bhash rinondibatsira kwazvo kuti ndibudirire mumabasa akasiyana siyana, uyezve ini ndakatochinja Bhash kuva Zsh nekuti ine mapfupi ekukurumidza ekhibhodi. Uyezve, ndakagadzira yangu Zsh theme nekuti ini ndanga ndatoishandisa mazuva ese.
Kubva ipapo zvichienda mberi, ini zvakare ndakave nehanya neinodya RAM. Uye hazvisi kuti ine zvishoma, kunyangwe isina zvakawanda: 4 GiB. Ini ndinoshandisa Ubuntu ne KDE, iyo ine yakanaka kwazvo graphical interface uye inoshandisawo Qt4 / 5 maraibhurari, ayo andinofarira zvakanyanya. Iyo system yacho pachayo inondipedza, pakutanga, isingasviki 300 MiB.
Iko kufarira. Ndinozvifarira. Zvide. Ini ndine zvese zvakabatanidzwa mune terminal uye izvo zvinondifadza. Uye kwete izvo chete, asi ini ndinazvo zvese repo paGithub, yakagadzirirwa neStow, kuti ndikwanise kuibatanidza uye kuyananisa zvese zvigadziriso pane chero mumwe muchina (Stow inondibvumidza kuti ndigadzire ndoga zvinongedzo mune yega yega dhairekitori inoenderana) .
Zvakare, mumapurogiramu ese aya ini ndinoshandisa iyo yakafanana dhizaini nephaleti yemavara gumi nematanhatu andakaverenga kuitira kudzikamisa musiyano nekuverenga kupenya kunoonekwa uye kuita kuti mavara asiyanise zvakanyanya kune ziso remunhu nekuparadzanisa hue yeruvara rumwe nekona imwechete yeiyo RGB vhiri vhiri. Kune izvi ndakaisa maalgorithms akatiwandei ayo akanditendera kuti ndione iwo akanakisa mavara kuitira kuti ndisashungurudza maziso angu. Ipapo, kubva kune imwechete terminal, ndakaisa kune yepamutemo repamutemo paGithub.
Ehezve, pandinofanira kushandisa graphic mode, ndinofara kushandisa mbeva kugadzira neInkscape, kudzoreredza mapikicha neGimp uye kushandisa ese graphical maficha eKDE, nemhedzisiro yavo, maturusi avo uye zvese zvavanogona. Ini ndinobvuma kuti ini ndingadai ndisingafare pasina graphical nharaunda.
Pane mazuva andinofarira kuwana nyaradzo yekusafanira kushandisa mbeva. Zvese zvine mapfupi uye mirairo. Uye kune mazuva apo mbeva iri mubatsiri mukuru kune mamwe marudzi emabasa, inovawo chaiyo, yekutamba, ine yakapfava mbeva padhi. Ini ndinongoda mechina keyboard kuti unakirwe nemakiyi padanho rimwe chete: D.